စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ၏တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ (၂၀၁၅) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှု
ကြိုတင် Published in ပြည်တွင်းသတင်း
ဒီဇင်ဘာလတွင် 18, 2012, Doi: 10.1101 / cshperspect.a011932
မူပိုင်ခွင့်© 2013 အေးနွေဆိပ်ကမ်းဓာတ်ခွဲခန်းစာနယ်ဇင်း; မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
Louk JMJ Vanderschuren1,2 နှင့်
Serge အိပ်ချ် Ahmed က3
1သိပ္ပံနှင့် Society မှာတိရစ္ဆာန်များဌာန, အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ, ကုသရေးဆေးပညာ, Utrecht တက္ကသိုလ်, 3584 CG Utrecht, နယ်သာလန်ဌာန၏တိုင်း
2အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ Rudolf Magnus Institute မှ, အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်ဆေးဝါးဗေဒဌာန, တက္ကသိုလ် Medical Center မှ Utrecht, 3584 CG Utrecht, နယ်သာလန်
3Universitéက de ဘော်ဒိုး, Institut des ဒေနာNeurodégénératives, CNRS UMR 5293 F-33000 ဘော်ဒိုး, ပြင်သစ်
ဒါဟာ ပို. ပို. ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေလေ့လာနေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာစစ်မှန်သောစွဲ, လေ့လာနေဖို့တူညီခြင်းမရှိပါကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ ဤသည်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်စစ်မှန်သောစွဲတူသောအပြုအမူဖမ်းယူရည်ရွယ်မကြာသေးမီအလုပ်မှုတ်သွင်းထားပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းတှငျကြှနျုပျတို့တိုးချဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်စွဲလမ်းအများအပြား DSM-IV-တူသောရောဂါလက္ခဏာများ၏ဖြစ်ပျက်မှုများအတွက်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားအနှစ်ချုပ်။ ဤရွေ့ကားလက္ခဏာတွေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တင်းမာမှု, neurocognitive လိုငွေပြမှု, မျိုးသုဉ်းရန်ခုခံ, မူးယစ်ဆေးဝါးအဘို့တိုးလာလှုံ့ဆျောမှု, nondrug ဆုလာဘ်ကျော်မူးယစ်ဆေးများအတွက်ဦးစားပေးများနှင့်ပြစ်ဒဏ်ခုခံပါဝင်သည်။ စွဲတူသောအပြုအမူဖြစ်ပွားနိုင်သည်နှင့်တိရစ္ဆာန်များတွင်လေ့လာဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုအာရုံကြောနှင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာဒီကြီးကျယ်သောရောဂါပိုမိုထိရောက်သောကုသမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်သွားစေပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ထားတဲ့မူးယစ်ဆေးစွဲ၏မျိုးဗီဇနောက်ခံစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
မူးယစ်ဆေးစွဲမပြုအနည်းဆုံးကြောင့်လူအများကကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံနှင့်အခြားအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်အတူ comorbidity တစ်ခုကြီးမားဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်လူမှုစီးပွားရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကစွဲမိမိတို့ကိုယ်ထက် သာ. များသောလူတွေကိုသက်ရောက်သည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးစွဲအားလုံးအဓိကအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန် (များ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းမှဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျစရိတ်ထက်ပို 40% များအတွက်အကောင့်ကြောင်းတွက်ချက်ထားသည်Uhl နှင့် 2004 တိုးတက်ကြီးပွားခြင်း).
စွဲမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေထိန်းချုပ်ဆုံးရှုံးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာနာတာရှည် relapsing ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏သင်တန်းကျော်, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမသင့်လျော်အသုံးပြုမှုကို ( "အလွဲသုံးစားမှု") မှပေါ့ပေါ့စားသုံးမှုကနေကိုအရှိန်နှင့်ဘာသာရပ်နောက်ဆုံးမှာ, အခြားသူများအကြား, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်လှုပ်ရှားမှုများ၏ဖြစ်ပျက်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောမူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့်ဆည်းပူးနေထိန်းချုပ်, ရှုံး ယခင်ကအရေးကြီးသောလူမှုရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လှုပ်ရှားမှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာနှင့်၎င်း၏ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ၏အသိအမြင်နေသော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆက်ပြောသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဤကိစ်စတှငျတိုးတက်မှုမြင်ကြပြီဖြစ်သော်လည်း (O 'Brien 2008; Koob et al ။ 2009; ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး 2011; ပီယပ် et al ။ 2012), မူးယစ်ဆေးစွဲပိုမိုထိရောက်သော pharmacotherapies, ထိုရောဂါ၏အဓိကပါဝငျထားတဲ့မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့၏ဆုံးရှုံးမှုကိုပစ်မှတ်ထားကြောင်းအထူးသဖြင့်သူတို့အဘို့တစ်နှိပ်လိုအပ်နေတုန်းပဲရှိသေး၏။ ထိုကဲ့သို့သောကုထုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်, compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏အာရုံကြောအလွှာ၏ elucidation မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ သို့သော် compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေပေါ့ပေါ့ခွဲခြားသော neurobiological အချက်များမဟုတ်အနည်းဆုံးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိရစ္ဆာန်အလေ့လာမှုများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးထူထောင်အတွက်အခက်အခဲများ၏, လူသိများကြသည်မဟုတ်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကာလအတွင်းအများအပြားစုံစမ်းစစ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်စွဲ phenotype ကိုအတုခိုးပြီးအောင်မြင်ပါပြီ, ကြှနျုပျတို့, compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု (ဥပမာအနေဖြင့်ပေါ့ပေါ့ခွဲခြားသော neurobiological အချက်များနားလည်ရန်စတင်နေကြသည် Holland et al ။ 2010; im et al ။ 2010; Kasanetz et al ။ 2010; Zapata et al ။ 2010).
ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်တှငျကြှနျုပျတို့တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအတွက်စွဲလမ်းအပြုအမူ၏ရှုထောင့်လေ့လာလုပ်ထားပြီးကြောင်းမကြာသေးမီတိုးတက်မှုကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ငါးဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါး Self-အုပ်ချုပ်ရေး, အခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေးများနှင့် intracranial Self-stimulation အပေါ်လေ့လာမှုများ, မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များနှင့်အားဖြည့် (ဥပမာများ၏အာရုံကြောအလွှာကိုရည်မှတ်ဒေတာတစ်ခုကြီးမားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရလဒ်ပါပြီ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု 1996; Tzschentke 2007; O'Connor et al ။ 2011) ။ ဤသည်ကိုသိသောဥာဏ်ကလူမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစတင်သုံးစွဲဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှု၌၎င်း, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနဦးထိတွေ့ပြီးနောက်ဆက်လက်အဘယ်ကြောင့်အချို့အတိုင်းအတာအထိတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်မျှသာမူးယစ်ဆေးယူပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာစစ်မှန်သောစွဲ, လေ့လာနေဖို့တူညီခြင်းမရှိပါကြောင်းတိုးပွားလာအသိပညာလည်းမရှိ။ လယ်ပြင်အတွင်းဤအချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုသုတေသီများဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်စွဲလမ်းကဲ့သို့အပြုအမူ၏စစ်မှန်သောရှုထောင့်ကိုဖမ်းယူဖို့ (ကစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဒီဂရီမှအောင်မြင်ခဲ့ကြပါပြီ, ငါတို့ငြင်းခုန်ရန်ဆန္ဒရှိကဲ့သို့၎င်း,) ကြိုးစားခဲ့ကြရာကနောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုအတွက်သုတေသနမှုတ်သွင်းထားပါတယ် (Ahmed က 2005, 2012; Vanderschuren နှင့် Everitt 2005; Kenny 2007) ။ အောက်တွင်ကျနော်တို့တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအတွက်စွဲတူသော phenotypes ၏ဖြစ်ပျက်မှုအတှကျအထောကျအထားဆှေးနှေးပါမညျ။ (စွဲလမ်းများအတွက် DSM-IV စံသောကြောင့်စားပွဲတင် 1()အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး 2000) ကျယ်ပြန့်စွဲလမ်းကဲ့သို့သောအပြုအမူသတ်မှတ်နှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများရန်မှတ်ကျောက်အဖြစ်လက်ခံကြသည်, ကျနော်တို့တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများကိုဖော်ပြရန်တစ်လမ်းညွှန်အဖြစ်ကဤသုံးပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့ (ဤ DSM-IV စံတိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက်လေ့လာခဲ့နိုင်သည့်အတွက်နည်းလမ်းများစွာခွဲခြားသတ်မှတ်စားပွဲတင် 2()Wolffgramm နှင့် Heyn 1995; Ahmed ကနှင့် Koob 1998; Deroche-Gamonet et al ။ 2004; Vanderschuren နှင့် Everitt 2004; Ahmed က 2012), ပြီးတော့သည်ဤဖြစ်ရပ်ထပ်ခါတလဲလဲသို့မဟုတ်ရွေ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပြီးနောက်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်သောသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။
မူးယစ်ဆေးစွဲဘို့ DSM-IV စံ
မူးယစ်ဆေးစွဲ၏တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအတွက် DSM-IV စံ၏ပုံပန်းသဏ္ဍာန်
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တင်းမာမှုလျှော့ချစွဲဖို့အကူးအပြောင်း (တစ်လက်ခဏာဇာတ်စင်ဖြစ်ပါသည်Ahmed က 2012) ။ စွဲနီးပါးအားလုံးကိစ္စများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုများဆုံးရှုံးမှုပါ (စွဲပြည်နယ်သို့နွယ်ဖွားလွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းအာရုံကြောအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်တွေရဲ့ array သွေးဆောင်ဖွယ်ရှိသောမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအတွက်သိသာများပြားနေဖြင့်ရှေ့ပြေးသို့မဟုတ်လိုက်ပါသွားဖြစ်ပါတယ်Vanderschuren နှင့် Everitt 2005; Kalivas နှင့် O 'Brien 2008) ။ အစဉ်အလာ, အချိန်ကျော်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်တိုးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပြုသဘောပုဂ္ဂလဒိဋ္သက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်တာဝန်ထမ်းဆောင်, ဒါပေမယ့်လည်းမဟုတ်မှသာသိရပါအံ့ (သို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းလက္ခဏာတွေ (ဆိုလိုသည်မှာ, အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောပုဂ္ဂလဒိဋ္မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆိုးကျိုးများအတွက်လျော့) သည်းခံစိတ်၏ဖြစ်ပျက်မှုမှစွပ်စွဲခဲ့ကြ ) ရုပ်သိမ်းရေး၏အနုတ်လက္ခဏာပြည်နယ် ameliorate ။ စွဲလမ်း၏ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုရောဂါလက္ခဏာတွေ DSM-IV ၌နေသောနှစ်ပါးအချက်များ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်တဦးတည်းကိုအခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, လူ့အဖွဲ့အစည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သည်းခံစိတ်မှမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တင်းမာမှုတူညီမနေသင့်, စီးပွားရေးအကြောင်းအချက်တွေလည်း (မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်Ahmed က 2011).
တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများများတွင်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏တင်းမာမှုအရှိဆုံးကျယ်ပြန့်ကိုကင်းနှင့်အအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး setting တွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆက်စပ်ဖြင့်တစ်မှတ်တိုင်လေ့လာမှုမှာ Ahmed ကနှင့် Koob (1998) ပိုပြီးကန့်သတ်မူးယစ်ဆေး access ကို (ဆိုလိုသည်မှာ6ဇ / ဃ) နှင့်အတူကြောင့်ပင်အတော်ကြာပြီးနောက်သိသိသာသာတည်ငြိမ်ကျန်ရစ်သော်လည်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးထပ်တိုးခွင့်နှင့်အတူကြွက် (ဆိုလိုသည်မှာ 1 ဇ / ဃ) တဖြည်းဖြည်းရက်ပေါင်းတစ်လွှားသူတို့ရဲ့ကင်းစားသုံးမှုတိုးပွားလာကြောင်းပြသ စမ်းသပ်ခြင်း၏လ (Ahmed ကနှင့် Koob 1999) ။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမူးယစ်ဆေးထပ်တိုးခွင့်နှင့်အတူကင်းစားသုံးမှု၏အဆိုပါတင်းမာမှုလွတ်လပ်စွာအကြိမ်ပေါင်းများစွာ (ဥပမာပုံတူကူးယူထားသည်, ဗင်္ရက်ရှာဟာ et al ။ 2008; Mantsch et al ။ 2008; Oleson နှင့်ရောဘတ် 2009; Quadro နှင့် Miczek 2009; Hao က et al ။ 2010; Holland et al ။ 2010; Pacchioni et al ။ 2011; ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ Ahmed က 2011, 2012) ။ ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏သမိုင်းနှင့်အတူကြွက်လည်း (ဥပမာမူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်တိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်စွဲလမ်းအပြုအမူ၏အခြားအမူအကျင့်လက္ခဏာများ, ဖော်ပြရန်ပြခဲ့ကြPaterson နှင့် Markou 2003; Lenoir နှင့် Ahmed က 2008; Wee et al ။ 2008; Orio et al ။ 2009; ဒါပေမယ့်ကြည့်ရှု လျူ et al ။ 2005aမျိုးသုဉ်းပြီးနောက်ကင်းရှာ၏ reinstatement များအတွက်) တစ်ခုတိုးလာ sensitivity ကို (Mantsch et al ။ 2004; Ahmed ကနှင့် Cador 2006; Kippin et al ။ 2006; Knackstedt နှင့် Kalivas 2007), နှင့်ကိုကင်းရှာကြံ၏ပြစ်ဒဏ်မှ sensitivity ကိုလျှော့ချ (Vanderschuren နှင့် Everitt 2004; Ahmed က 2012) ။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမူးယစ်ဆေးထပ်တိုးခွင့်အပြီး Self-အုပ်ချုပ်ရေးစက်လှေကားနောက်ပိုင်းတွင်လည်းစိတ်ကြွဆေး (ဥပမာအပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုတခြားမူးယစ်ဆေးဝါး, အဘို့ရှာတွေ့ခဲ့ပြီး, Kitamura et al ။ 2006), ဘိန်းဖြူ (Ahmed က et al ။ 2000), နှင့် methylphenidate (Marusich et al ။ 2010), သို့သော်သိသိသာသာမဟုတ်, နီကိုတင်းအဘို့ (Paterson နှင့် Markou 2004; Kenny နှင့် Markou 2005).
တစ်ဦးအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသော setting ကိုအတွက်ကြောင့်အကြိမ်ကြိမ်ကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင်ခံတွင်းအီသနောကိုစားသုံးမိကိုလည်းအချိန်ကျော်တိုးပွါးကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်။ တစ်ဦးရှေ့ဆောင်လေ့လာမှု၌, ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု (1973) အီသနောမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းကြွက် (ဆိုလိုသည်မှာသည်အခြားနေ့က) တဖြည်းဖြည်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့အရက်စားသုံးမှုတိုးပွားလာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်, Wolffgramm နှင့် Heyn (Wolffgramm 1991; Wolffgramm နှင့် Heyn 1991, 1995) (ပြစ်ဒဏ်ပေးရန်ဥပမာခုခံအောက်တွင်ကြည့်ပါ) အတော်လေးတည်ငြိမ်အီသနောစားသုံးမှု၏လပေါင်းများစွာပြီးနောက်ကြွက်စွဲတူသောအပြုအမူ၏အခြားဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သည့်အီသနောအရက်သောက်, သူတို့ရဲ့အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, သူတို့ကထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကြွဆေးကဲ့သို့သောအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ, (အဘို့ပါးစပ်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမိ၏အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်တိုးပြသခဲ့သည်Heyn နှင့် Wolffgramm 1998), အ opiate etonitazene (Wolffgramm နှင့် Heyn 1995, 1996), ဒါပေမယ့်ဒီထက်ဒါနီကိုတင်းအဘို့ (Galli နှင့် Wolffgramm 2011) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်, Spanagel နှင့်Hölterနှင့်ကိုက်ညီ (Hölter et al ။ 1998; Spanagel နှင့်Hölter 1999) မိမိတို့၏နေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာအီသနော၏ကွဲပြားခြားနားသောပြင်းအားမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူကြွက်ဆုတ်ခွာ၏ထပ်ခါတလဲလဲကာလနှင့်အတူရေရှည်အီသနောထိတွေ့ပြီးနောက်၎င်းတို့၏စားသုံးမှုတိုးပွားလာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဤတိရိစ္ဆာန်များပိုမိုမြင့်မားအီသနောပြင်းအားသောက်ရမယ့်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်လည်းပြစ်ဒဏ်လျှော့ချ sensitivity ကိုလက္ခဏာပြသသည်။ တစ်ဦး operating setting ကိုခုနှစ်, အီသနောထံမှထပ်ခါတလဲလဲဆင်းရဲချို့တဲ့လည်း (Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီသနောဖို့လှုံ့ဆျောမှုတစ်ခုတိုးအကြံပြုခြင်း, fixed-အချိုးအစားနှင့်တိုးတက်သော-အချိုးအချိန်ဇယားနှစ်ဦးစလုံးအောက်မှာအီသနောများအတွက်တုံ့ပြန်တိုးမြှင့်ပြသခဲ့သည်Rodd et al ။ 2003) ။ အခြားမျိုးစိတ်ဤလေ့လာမှုများတိုးချဲ့, Lesscher et al ။ (2009) ကြွက်2ဇ / ဃများအတွက်အီသနောမှဝင်ရောက်ခွင့်ခဲ့သည့်အတွက်ကန့်သတ် access ကိုရှေးခယျြမှုပါရာဒိုင်းအတွက်ဤတိရိစ္ဆာန်များတဖြည်းဖြည်းစမ်းသပ်၏4ပတ်ကျော်က၎င်းတို့၏အီသနောစားသုံးမှုဆိုးရွားလာခဲ့သည်ဖြစ်သည်။ ပြသကြ
အပြုအမူကျော်ချို့ယွင်းထိန်းချုပ်ရေး: Neurocognitive လိုငွေပြမှု
မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် neurocognitive လိုငွေပြမှု၏ဖြစ်ပျက်မှုကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်နေသည် (Bechara 2005; Garavan နှင့်ရဲရငျ့စှာပွော 2005; Paulus 2007; Robbins et al ။ 2008; ကုန်သည်များ et al ။ 2009; စတိန်း et al ။ 2009) ။ by နဲ့ကြီးမားတဲ့စွဲလမ်းအတွက်သိမြင်မှုလိုငွေပြမှုအတော်လေးပျော့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုကဲ့သို့သောအာရုံစူးစိုက်မှုအဖြစ် functions များ, အမျိုးမျိုးကိုထိခိုက်, မှတ်ဉာဏ်, မှတ်ဉာဏ်, စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအလုပ်လုပ်။ ဤရွေ့ကားလိုငွေပြမှုနည်းလမ်းများစွာအတွက်စွဲလမ်းမှအထောက်အကူဖြစ်စေ။ ဥပမာအားဖြင့်, ချို့ယွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်, အခက်အခဲ prepotent မူးယစ်ဆေး-ယူပြီးလုပ်ရပ်များတားစီးဖို့ဒါမှမဟုတ်အနာဂတ်ဆန္ဒပြည့်အဘို့စောင့်ဆိုင်းရန်, ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးကိုချက်ချင်းမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့မူးယစ်ဆေး-အခမဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့များ၏နှောင့်နှေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုချိန်ဖို့ဒသဘော, ဖွယ်ရှိအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ စွဲလမ်းစေအပြုအမူများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အာရုံစူးစိုက်မှု၏ဘုံတှငျသိမြင်လိုငွေပြမှု, memory နဲ့မှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအလုပ်လုပ်သင်တန်းသားများကိုဒုက္ခမှမတက်ရောက်ရှိပါက, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်များ၏အောင်မြင်မှုကိုကန့်သတ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအကြံပေးခြင်း session တစ်ခုအတွင်းမှာသင်ယူခဲ့ရာကိုသတိရလိမ့်မည်။ အမှန်စင်စစ်တစ်လောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်အောင်ချို့ယွင်းဆုံးဖြတ်ချက် (အရက်သမားအတွက် relapse ၏အန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ပြသထားသည်Bowden-ဂျုံးစ် et al ။ 2005), နှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မရှိခြင်းကိုကင်းစွဲဆင်းရဲသားကုသမှု retention ကိုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (Moeller et al ။ 2001) နှင့်အရက်သမားအတွက် relapse အစောပိုင်းက (Charney et al ။ 2010).
ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်လိုငွေပြမှု (ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း, အရက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်မြီးကောင်ပေါက် predisposes ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့တချို့သက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိပေမယ့်ရှင်းနေသည်မှာ, က, ဤ neurocognitive လိုငွေပြမှုအကြောင်းရင်းသို့မဟုတ်စွဲလမ်းအပြုအမူ၏အကျိုးဆက်များမှာရှိမရှိလူသားတွေအတွက်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ပိုင်းခြားသိမြင်ရန်ခက်ခဲသည်Nigg et al ။ 2006; Audrain-McGovern et al ။ 2009) ။ စိတ်ဝင်စားစရာစွဲလမ်းအပြုအမူနှင့် neurocognitive function ကိုအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်မှတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုတစ်ခုထွန်းသစ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤလေ့လာမှုများအကြောင်းမရှိနှင့်အကျိုးဆက်နှစ်ခုလုံးအယူအဆတွေကိုထောကျပံ့။ ထို့ကြောင့်ကြွက်များအတွင်းမြင့်မားတဲ့ Impulse အရက်သောက်, နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး, ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ကိုကင်းစွဲလက္ခဏာ (ရန်အားနည်းချက်ခန့်မှန်းPoulos et al ။ 1995; ပယ်ရီ et al ။ 2005; Dalley et al ။ 2007a; ဘီးလင်း et al ။ 2008; Diergaarde et al ။ 2008), ထကြွလွယ်သောအပြုအမူဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ပေါ်လာပါဘူးပေမယ့် (McNamara et al ။ 2010; Schippers et al ။ 2012) ။ ပြောင်းပြန်, တစ်ဦးကိုကင်း၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးကာလ, စိတ်ကြွဆေး, MDMA, ဒါမှမဟုတ်ဘိန်းဖြူ (အာရုံစူးစိုက်မှုအပါအဝင်ကြွက်များတွင်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာအမျိုးမျိုးကိုထိခိုက်ဖို့လုပ်ဆောင်နေမှတ်ဉာဏ်, သိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်နှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူကိုပြသထားသည်Dalley et al ။ 2005, 2007b; Calu et al ။ 2007; Briand et al ။ 2008; ရော်ဂျာ et al ။ 2008; Gipson နှင့် Bardo 2009; Winstanley et al ။ 2009; Mendez et al ။ 2010; Parsegian et al ။ 2011; Schenk et al ။ 2011; Schippers et al ။ 2012) ။ စိတ်ဝင်စားစရာဤလိုငွေပြမှုအချို့ကိုအထူးသ (ဆိုးရွားလာခဲ့သည်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေတဲ့သမိုင်းနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များအတွက် (ဒါကြောင့်ပိုပြီးအရေးပါသို့မဟုတ်) ရှုလေ့လာခဲ့ကြBriand et al ။ 2008; ဂျော့ခ်ျ et al ။ 2008; ရော်ဂျာ et al ။ 2008; Gipson နှင့် Bardo 2009) ။ မျောက်ဝံများအတွက်တစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုကိုလည်းသိမြင်လွယ်ပြင်လွယ်မရှိတဲ့ပြကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (တစ်ရှည်သမိုင်းပြီးနောက်မှတ်ဉာဏ်လိုငွေပြမှုအလုပ်လုပ်ကိုင်အထမ်းသမား et al ။ 2011) ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကာလက high-ထကြွလွယ်သောကြွက်များတွင် Impulse ကိုလျှော့ချဖို့နဲ့တစ်ဦးရေဝင်္အတွက်သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးတက်စေရန်ပြသခဲ့ပါသည်အဖြစ်စိတ်ဝင်စားစရာသော်လည်း, ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ့ရှိချက်ကိုလည်း (သတင်းပေးပို့ခဲ့ကြDalley et al ။ 2007b; del Olmo et al ။ 2007), မူးယစ်ဆေး Self-ဆေးဝါးအချို့ပုံစံများကိုရှင်းပြပါစေခြင်းငှါတစ်ဝိရောဓိအကျိုးသက်ရောက်မှု။
မူးယစ်ဆေးဝါးများရှောင်အခက်အခဲမူးယစ်ဆေး (ဆိုလိုသည်မှာသုဉ်းအတွက်တုံ့ပြန်) ရရှိနိုင်မရှိတော့အခါမူးယစ်ရှာကြံအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာခဲ့နိုင်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်မျိုးသုဉ်းရန်ခုခံဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေး (ထပ်တိုးခွင့်တစ်သမိုင်းနှင့်အတူဘိန်းဖြူ-ဆုတ်ခွာကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်Ahmed က et al ။ 2000; Lenoir နှင့် Ahmed က 2007; ဒိုဟာဆီ et al ။ 2009) ။ သို့သော် Self-အုပ်ချုပ်ရေးတင်းမာမှု, ဥပမာ (ကိုကင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးထပ်တိုးခွင့်တိုးမြှင့သုဉ်းအတွက်တုံ့ပြန်မှုမထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မျိုးသုဉ်းရန်ခုခံများအတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်မထင်ထားဘူး Mantsch et al ။ 2004; Sorge နှင့် Stewart က 2005; Kippin et al ။ 2006; Allen က et al ။ 2007; Knackstedt နှင့် Kalivas 2007; ရော်ဂျာ et al ။ 2008) ။ စိတ်ဝင်စားစရာသော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါး၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ nonavailability ၏ကာလအတွင်းမှာကင်းများအတွက်တုံ့ပြန်အတွက်တဖြည်းဖြည်းတိုး (လည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံကအပြီးစွဲလမ်းကဲ့သို့အပြုအမူ၏အခြားနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပြသကြောင်းကြွက်များ၏လူမျိုးခွဲများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိပြီDeroche-Gamonet et al ။ 2004; ဘီးလင်း et al ။ 2009) ။ ထို့အပွငျကမကြာသေးမီကကြောင်းတုံ့ပြန် operant သောအပြုအမူတစ်ခုဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုယင်း၏ရလဒ်၏တန်ဖိုးမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့ဖြစ်ပါသည်အားပေးအားမြှောက် (ရှည်ရှည်လေ့ကျင့်ရေးကျပန်းကြားကာလအချိန်ဇယားအောက်တွင်ကင်းရရှိနိုင်မှုများအတွက်တုံ့ပြန်ကြောင်းပြသခဲ့ပါသည်; [Dickinson 1985]) (တုန့်ပြန်တာကိုကင်းများမျိုးသုဉ်းပြီးနောက်တုံ့ပြန်မြဲဖို့ဦးဆောင်Zapata et al ။ 2010) ။ ဒီလေ့လာမှုမှာ (ကိုလညျးရှု Olmstead et al ။ 2001), အခွင့်အလမ်းကိုယူပြီးတစ်ဦးကိုကင်းများအတွက်တုံ့ပြန်, တိုတောင်းတဲ့လေ့ကျင့်ရေးသမိုင်းနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အထက်ဖော်ပြထားတဲ့လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းမျိုးသုဉ်းရန်အထိခိုက်မခံခဲ့တဲ့ (Deroche-Gamonet et al ။ 2004; ဘီးလင်း et al ။ 2009), ကြောင်းမြဲသုဉ်းအတွက်တုံ့ပြန်တိုးမြှင့်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးကြောင်းပြသခဲ့သည်။
မျိုးသုဉ်းရန်အ sensitivity ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပုံနောက်ထပ်အချက်တစ်ချက် Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာ၏အရှည်သည်။ ထို့ကြောင့်ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူ၏မျိုးသုဉ်းရန်ခုခံ၏ဒီဂရီတိုးချဲ့မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး (ထံမှဆုတ်ခွာ၏အရှည်နှင့်အတူတိုးပွားလာရှာကြံFerrario et al ။ 2005; zhou et al ။ 2009) ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်တုံ့ပြန်၏ဤပေါက်ဖွားကျယ်ကျယ် Shaham နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (နေဖြင့်လေ့လာခဲ့ထားပြီးGrimm et al ။ 2001; ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဘို့အတွေ့ lu et al ။ 2004; Pickens et al ။ 2011) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကမူးယစ်ဆေး, ဒါမှမဟုတ်မူးယစ်ဆေး-ဆက်စပ်တွေကိုများအတွက်တုံ့ပြန်အော်ပရေတာများ၏မျိုးသုဉ်းရန်အ sensitivity ကိုအချိန်-မှီခိုကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာရုပ်သိမ်းမှုနှင့်အတူ 1 wk နှင့်3mo postwithdrawal အကြား (ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမူးယစ်ဆေးပေါ် မူတည်. ) မျိုးသုဉ်းတိုး, ထိပ်မှာရှိတဲ့တုံ့ပြန်နှင့်အဲဒီနောက်ငြင်းပယ်။ စူးရှသောမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာများ၏တုံ့ပြန်မှု-နှိပ်ကွပ်သက်ရောက်မှု၏လွန်ကျူး postwithdrawal ပထမဦးဆုံးရက်အနည်းငယ်အတွင်းတုံ့ပြန်အတွက်မြင့်တက်အချို့ကိုရှင်းပြနိုငျသျောလညျးထိုပေါက်ဖွားအကျိုးသက်ရောက်မှု၏ယာယီ profile များကို, နှင့်အာရုံကြောအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ပါဝင်ပတ်သက်-The ဖွယ်ရှိနှင့်ဆက်စပ်သည်မရာအများစု မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာများ၏တုံ့ပြန်မှု-ဖိနှိပ်သို့မဟုတ် anhedonic ဂုဏ်သတ္တိများ (lu et al ။ 2004; Pickens et al ။ 2011) မူးယစ်ဆေးများအတွက်တုံ့ပြန်၏ -suggest ကြောင့်ပေါက်ဖွားကိုလည်းမူးယစ်ဆေးများအတွက်လှုံ့ဆျောမှု, သို့မဟုတ်အပြုအမူအပေါ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူယန္တရားများပါဝငျသညျ။
တိရစ္ဆာန်များအတွက်မူးယစ်ဆေးယူလှုံ့ဆျောမှုအများဆုံးမကြာခဏအားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားကိုသုံးပြီးလေ့လာခဲ့သည်တိရိစ္ဆာန်များကိုတိုင်းနောက်ဆက်တွဲအကျိုးသည်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုတိုးပွားလာစေရန်ရှိသည်ရသော (Hodos 1961; ရစ်ချတ်ဆန်နှင့်ရောဘတ် 1996) ။ ဒီအချိန်ဇယားကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးကာလအပြီး, မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်တိရိစ္ဆာန်များ၏လှုံ့ဆော်မှုတိုးမြှင့်နိုင်သည်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာသတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း၏သမိုင်းနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များ (ကန့်သတ်ကင်းလက်လှမ်းခဲ့တိရိစ္ဆာန်များထက်ပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်တုံ့ပြန်ရန်တွေ့ရှိခဲ့သည်Paterson နှင့် Markou 2003; Allen က et al ။ 2007; Larson et al ။ 2007; Wee et al ။ 2008, 2009; Orio et al ။ 2009; Hao က et al ။ 2010ဒါပေမယ့်ကြည့်ရှု Quadro နှင့် Miczek 2009) ။ ဒီအကြိုးသကျရောနောက်ပိုင်းတွင်လည်း (စိတ်ကြွဆေးအပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုတခြားမူးယစ်ဆေးဝါး, အဘို့ရှာတွေ့ထားပြီWee et al ။ 2007) နှင့်ဘိန်းဖြူ (Lenoir နှင့် Ahmed က 2007) ။ ထူးခြား, ရောဘတ်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါး၏ကာလ (ကိုကင်းသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူ) Self-အုပ်ချုပ်မှုအားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင်တိုးမြှင့်ချိုး-ရမှတ် (စေပါတယ်ကြောင်းပြသလျူ et al ။ 2005b, 2007; မော်ဂန် et al ။ 2005, 2006; ရပ်ကွက် et al ။ 2006), ဒါပေမယ့်ကင်းများအတွက်လှုံ့ဆျောမှု၌ဤတိုးကန့်သတ်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပိုပြီးသိသာဖြစ်ထငျရှား (လျူ et al ။ 2005b; မော်ဂန် et al ။ 2006) ။ ဒီဓာတ်ခွဲခန်းကနေတစ်ဦးကနောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှု (Oleson နှင့်ရောဘတ် 2009) ကိုကင်းစားသုံးမှု၏တင်းမာမှုမြင့်မားသောယူနစ်ဆေးများမှာကင်းများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုတိုးလာ, ဒါပေမယ့်ကင်းတဲ့တံခါးခုံကိုထိုးမှာတုံ့ပြန်နှုန်းလျှော့ချ, ပမာဏလျှင်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်းစားသုံးမှု၏သမိုင်းအပြီး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မူးယစ်ဆေးပိုယူသည်ဟုအကြံပြုကြောင်းပြသ (မရရှိနိုင်ပေမယ့်မူးယစ်ဆေးတစ်ခုအနိမ့်ငွေပမာဏအဘို့အမြင့်မားသောစျေးနှုန်းဆပ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေကြသည်မဟုတ်Oleson နှင့်ရောဘတ် 2009) ။ အများဆုံးစျေးနှုန်းတိရိစ္ဆာန်များဘိန်းဖြူများအတွက်ဆပ်ဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့ကြသည်အဖြစ်မတူဘဲ, ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးတင်းမာမှု, မူးယစ်ဆေးဝါး၏တန်ဖိုးတိုးမြှင့်ဖို့ပြသခဲ့ပါသည် (တိုးပွားလာခဲ့သည်Lenoir နှင့် Ahmed က 2008) ။ ကိုကင်းများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုအတွက်တိုးမြှင့်လည်း (အချိန်ကြာမြင့်စွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကြွက်တစ်အဖွဲ့ခွဲ၌တွေ့ကြပြီDeroche-Gamonet et al ။ 2004; ဘီးလင်း et al ။ 2009).
ကိုကင်းဘို့တိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အပိုဆောင်းသက်သေအထောက်အထားစက်လှေကား Self-အုပ်ချုပ်ရေးအော်ပရေတာလေယာဉ်ပြေးလမ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသုံးပြီးရယူလိုက်ပြီးနောက်။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင်တိုးချဲ့ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူကြွက် (ထိန်းချုပ်မှုကင်း၏သွေးကြောသွင်း bolus ခံယူဖို့ရည်မှန်းချက် box ကိုရောက်ရှိဖို့ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သို့ပွေးလေ၏ဗင်္ရက်ရှာဟာ et al ။ 2008) ။ ဒီလေ့လာရေးနှင့်အတူအတန်ငယ်ဗညျြး, Deroche et al ။ (1999) ယခင်ကဤတိရစ်ဆာနျမြားကိုကင်းအားဖြည့်များအတွက်လေယာဉ်ပြေးလမ်းသို့ခရီးလှညျ့ဖို့လျော့နည်းအချိန်ကိုယူသကဲ့သို့, မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများသည်ရှည်လျားသောကင်းသမိုင်းယူပြီးအတူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လုပ်ခဲ့ပြီးခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမူးယစ်ဆေးစွဲ၏အဓိကအမူအကျင့်လက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုဆက်လက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏မျက်နှာသာအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအပျော်အပါးသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားတစ်တိုးတက်သောလျစ်လျူရှုဖြစ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေး preference ကို, အရေးကြီးသောလူမှုရေး, လုပ်ငန်းခွင်၏ရလဒ်အဖြစ်သို့မဟုတ်အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများပြင်းထန်အခွင့်အလမ်းစရိတ်များ (ဥပမာ, ဆင်းရဲသောပညာရေးနှင့်ဆက်စပ်ရေရှည်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ) တွင်အလှည့်မှုဖွင့်ပေးထားရသည်။ စွဲကုသ facing အရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှုအတားအဆီးတစ်ခုမှာ nondrug လှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်အပြုအမူတွေကအခြားရွေးချယ်စရာနေဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအဘို့ဤ maladaptive preference ကိုအစားထိုးရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
စွဲလမ်း၏တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများများတွင်မူးယစ်ဆေး preference ကိုမူးယစ်ဆေး access ကို-တစ်ဦးစံစမ်းသပ်ဆက်တင်များ (ချို့တဲ့ရသောအမှုသည်အခွင့်အလမ်းစဉ်အတွင်းအခြားအမူအကျင့်ရွေးချယ်စရာသို့မဟုတ်ရွေးချယ်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်လေ့လာခဲ့နိုင်ပါတယ်Ahmed က 2005, 2010) ။ (အစားအစာ၏ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးအဘို့တစ်ခုသို့မဟုတ် nondrug အကျိုးသည်တုံ့ပြန်သေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစ: ပုံမှန်ရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုများတွင်တိရစ္ဆာန်များနှစ်ခုအမူအကျင့်ရွေးချယ်စရာရင်ဆိုင်ရAigner နှင့် Balster 1978) ။ ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုလေ့လာမှု-ရာကိုလည်း nonhuman အတွက်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြသနိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုအရွယ်ရောက်ချင်ပန်ဇီမျောက်အတွက်ကောက်ယူတိရိစ္ဆာန်များ-ခံခဲ့ရခံခဲ့ရ (တဦးတည်းအထီး, တဦးတည်းအမျိုးသမီး) (passive မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်မော်ဖင်းအကိုက်အပေါ်ကိုယ်ထိလက်ရောက်မှီခိုပြန်ဆိုSpragg 1940) ။ ချင်ပန်ဇီမျောက်ကမူးယစ်ဆေးဝါးဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းလတ်ဆတ်သောအသီးတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်း (လိမ္မော်ရောင်, ငှက်ပျော) ကျော်မော်ဖင်းအကိုက်နှစ်သက်ပေမယ့်မဟုတ်ရင်နှစ်သက်သောအစားအသောက် (ကိုလညျးရှု Negus 2006) ။ နောက်ဆက်တွဲသုတေသနတိရိစ္ဆာန်များအတွက်မူးယစ်ဆေး preference ကိုဥပမာ (ဆေးထိုး-မှီခိုခဲ့ကြောင်းပြသ, Nader နှင့် Woolverton 1991; Paronis et al ။ 2002; Negus 2003) နှင့်၎င်း၏ပြင်းအားတိုးပွားလာအသုံးပြုပုံဥပမာ (ထိုအခြားရွေးချယ်စရာ nondrug စစ်ကူ၏တန်ဖိုးတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်မယ်လို့; Nader နှင့် Woolverton 1991) ။ တိရိစ္ဆာန်များသာအဖွဲ့ခွဲ (ကကွဲပြားခြားနားတဲ့ရွေးချယ်မှုအောင်၏အခွင့်အလမ်းရှိနေသော်လည်းမူးယစ်ဆေးပိုနှစ်သက်ထဲမှာဆက်ရှိနေNader နှင့် Woolverton 1991; Lenoir et al ။ 2007; Cantin et al ။ 2010; Kerstetter et al ။ 2010; Augier et al ။ 2011; -Norman et al ။ 2011; ပယ်ရီ et al ။ 2011; မကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များအဘို့, Ahmed က 2010, 2012).
ဥပမာ, စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုမကြာသေးမီစီးရီးထဲမှာကြွက်ကိုကင်းနှင့် nondrug ဆုလာဘ် (saccharin သို့မဟုတ် sucrose နှင့်အတူဒူဆိုလိုသည်မှာ, ရေ) အကြားတစ်ဦးရွေးချယ်မှုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။ ဤရွေးချယ်မှုရင်ဆိုင်ခြင်း, ကြွက်များကိုကင်းပိုမိုနှစ်သက်သို့မဟုတ်ချိုမြိန်ရေမျှော်မှန်းတန်ဖိုးထက်အနိမ့်ခဲ့သည့်အခါလစျြလြူရှုခဲ့ကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ value ကိုလုံလုံလောက်လောက်မြင့်မားခဲ့သည့်အခါအခြားရွေးချယ်စရာစစ်ကူဆီသို့မိမိတို့၏ preference ကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ ဤသည် preference ကိုပြောင်းကုန်ပြီ (မသက်ဆိုင်ရရှိနိုင်ကင်း၏ဆေးထိုး၏ဖြစ်ပွားခဲ့သည်များနှင့်ပင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှတိုးချဲ့သုံးစွဲနိုင်၏ရှည်လျားသောသမိုင်းအောက်ပါLenoir et al ။ 2007; Cantin et al ။ 2010) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ယခင်သုတေသန (နဲ့အတူယေဘုယျအားတသမတ်တည်းများမှာကာရိုး et al ။ 1989; ကာရိုးနှင့်လက်ခ် 1993) နှင့်အစားအစာ (သို့မဟုတ် sucrose ဖေါ်ပြခြင်းမကြာသေးမီအပြုအမူဘောဂဗေဒလေ့လာမှုတွေနှင့်အတူ) ဝယ်လိုအား (ကိုကင်းဝယ်လိုအားထက်ပို inelastic ခဲ့သည်Christensen et al ။ 2008; Koffarnus နှင့်ဝုဒ် 2011; ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ Kearns et al ။ 2011) ။ သူတို့ကအစကြွက် midbrain dopamine အာရုံခံ (တိုက်ရိုက် optostimulation ကျော်သောက်သုံး sucrose ပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုနှင့်အတူအရတော့များမှာဒိုမင်ဂို et al ။ 2011) ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးထပ်တိုးခွင့်ပြီးနောက်, သို့သော်, ကြွက်တစ်အဖွဲ့ခွဲ (ဆိုလိုသည်မှာ, အကြမ်းဖျင်း 15% -20%) ဖို့အခြားရွေးချယ်စရာ option ကို-တစ်ဦးအတွက်တစ်ဦးမျှသာစိတ်မမှစွပ်စွဲမရနိုငျသောအပြုအမူကျော်ကင်းကြိုက်တတ်တဲ့ဆက်လက်, ဒါမှမဟုတ်ခြင်းကိုမနှစ်သက် ချိုရေ။ ချိုမြိန်ရေရရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာအခါအမှန်စင်စစ်, ကိုကင်း- သာ. နှစ်သက်ကြွက် (nondrug- သာ. နှစ်သက်ကြွက်များကဲ့သို့အစာရှောင်ခြင်းအဖြစ်အများကြီးနဲ့သောက်Cantin et al ။ 2010) ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ကိုကင်း- သာ. နှစ်သက်ကြွက်၏ဤအဖွဲ့ခွဲ (အချိန်မှာတောင်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ကင်းယူဆက်နှင့်ကယ်လိုရီမိမိတို့လိုအပ်မှသက်သာရာရစေရန် sucrose ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်Cantin et al ။ 2010) ။ ယင်း၏အခွင့်အလမ်းစရိတ်များရှိနေသော်လည်းကင်း preference ကို၏ဇွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဤကြွက်များတွင်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း (အစကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ) ဆုံးရှုံးအကြံပြုထားသည်။ ကိုကင်း- သာ. နှစ်သက်ကြွက်၏အဖွဲ့ခွဲအရှင်ကိုကင်းစွဲဖို့အကူးအပြောင်းအတွက်ကိုအများဆုံးအဆင့်မြင့်ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောဇာတ်စင်ကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ ဒါကနိဂုံးချုပ်မကြာသေးမီက (အခြားအစားအစာဆုလာဘ်မှယေဘူယျခဲ့သည်Kerstetter et al ။ 2010; ပယ်ရီ et al ။ 2011) နှင့်ဘိန်းဖြူ (et al M က Lenoir, L ကို Cantin, F ကို Serre, ။ , unpubl အပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုတခြားမူးယစ်ဆေးဝါး, ရန်။ ) နှင့်နီကိုတင်း (le Sage 2009; -Norman et al ။ 2011) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့က (လည်းကင်း, စိတ်ကြွဆေး, ဒါမှမဟုတ်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ပြစ်ဒဏ်များ၏ဖိနှိပ်မှုသက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ကြွက်များ၏လူမျိုးကွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည့်အခြားအတိုင်းအတာများချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Deroche-Gamonet et al ။ 2004; Galli နှင့် Wolffgramm 2004, 2011; Pelloux et al ။ 2007; ဘီးလင်း et al ။ 2008).
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတုယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီလေ့လာမှုများတစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငွေပမာဏတိရစ္ဆာန်စမ်းသပ်မှုအတွက်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ၏အသိပညာကြားမှဆက်လက်မြင်ကြပြီ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကသူတို့တစ်တွေအနုတ်လက္ခဏာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူတွဲခဲ့သည့်ရှာသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုယူပြီးအတွက်ပြစ်ဒဏ် Setup, ကိုအသုံးပြုပြီဘုံထဲမှာရှိသည်။ (အပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအီသနောများအတွက်) မူးယစ်ဆေးဝါးပါးစပ်စားသုံးမိပါ အသုံးပြု. လေ့လာမှုများတွင်ဤခါး tastant ကွီနိုင်နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဖြေရှင်းချက် adulterating အားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အခြားလေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးရှာကြံသို့မဟုတ် lithium chloride တို့သုံးပြီး Post-စားသုံးမိနာမကျန်းနှင့်အတူတာ, ဒါမှမဟုတ် footshocks သို့မဟုတ်စျေးမှာ-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုကို အသုံးပြု. (ဥပမာအပြစ်ပေးပါပြီ အာရှရပင်များနှင့် Schuster 1974; Bergman နှင့် Johanson 1981; Kearns et al ။ 2002).
အဆိုပါကွီနိုင်မော်ဒယ်ပထမဦးဆုံး (Wolffgramm နှင့် Heyn ကထုတ်ဝေတဲ့ခဲ့သည်Wolffgramm 1991; Wolffgramm နှင့် Heyn 1991) ။ ဒီလေ့လာမှုကအဖြစ်နောက်ဆက်တွဲအလုပ်, အတင်းအကျပ် abstinence တဲ့ကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အီသနောအရက်သောက်တစ်ရှည်ကာလပြီးနောက်, အီသနောကိုစားသုံးမိကွီနိုင်၏ထို့အပြင်မှအာရုံမခံစားနိုင်သောဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကွီနိုင်ကွီနိုင်၏ခါးအရသာအားဖြင့်လျှော့ချသူတို့ရဲ့စားသုံးမှုမဟုတ်ခဲ့, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုသာကန့်သတ်အတိုင်းအတာအထိဖြစ်ခဲ့သည်ရှေ့တော်၌, 6-9 mo များအတွက်အီသနောသောက်ကြောင်းကြွက်မှမရရှိနိုင်ခဲ့သောအီသနော, ထည့်သွင်းခဲ့သည်ဆိုပါကဆိုလိုသတည်း။ ဆနျ့ကငျြ, ကန့်သတ်အီသနောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကြွက်သိသိသာသာသူတို့ရဲ့စားသုံးမှုကိုလျှော့ချခဲ့ပေ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာမူးယစ်စားသုံးမှုပြီးနောက်ကွီနိုင်မသမာမှနှိုင်းယှဉ်ထုံထိုနောက်ပိုင်းတွင် (ထို opiate etonitazene အဘို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်Wolffgramm နှင့် Heyn 1995; Heyn 1996), စိတ်ကြွဆေး (Heyn နှင့် Wolffgramm 1998; Galli နှင့် Wolffgramm 2004) နှင့်နီကိုတင်း (Galli နှင့် Wolffgramm 2011) ။ စိတ်ဝင်စားစရာအဆုံးစွန်နှစ်ခုလေ့လာမှုများ (Galli နှင့် Wolffgramm 2004, 2011) ကွီနိုင်မသမာမှအာရုံမခံစားနိုင်သောရှည်စိတ်ကြွဆေးနှင့်သာကြွက်တစ်အဖွဲ့ခွဲအတွက်နီကိုတင်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါကွီနိုင်မသမာသောမော်ဒယ်မကြာသေးမီက (နှစ်ခုကိုသီးခြားလေ့လာမှုများအတွက်တက်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်Hopf et al ။ 2010; Lesscher et al ။ 2010). Hopf et al ။ (2010) 3-3 mo များအတွက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအီသနောသောက်ခွင့်ပြုခဲ့ကြွက် (4 ဃ / wk) အားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင် Self-စီမံခန့်ခွဲအီသနော၎င်းတို့၏လှုံ့ဆျောမှုအကဲဖြတ်သောအခါအီသနောရန်ကွီနိုင်၏ထို့အပြင်မှအာရုံမခံစားနိုင်သောကြ၏။ ပြသ စိတ်ဝင်စားစရာကွီနိုင်မှ sensitivity ကိုတိုတောင်းအီသနောအတှေ့အကွုံ (1.5 mo) ပြီးနောက်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်လှောင်အိမ်အရက်သောက် setup ကိုခုနှစ်တွင်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအီသနောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကြွက်၏တွေ့ရှိချက်များဥပမာအားဖြင့်, ဘုရားရဲ့, စဉ်ဆက်မပြတ်အီသနောလက်လှမ်းခဲ့တိရိစ္ဆာန်များထက်ကွီနိုင်မှလျော့နည်းထိခိုက်မခံခဲ့ကြ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု (1973) ကြောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအီသနော access ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်ခွင့်ထက်အီသနောကိုစားသုံးမိ၏ပိုကြီးတဲ့ပမာဏသာစေပါတယ်။ ကန့်သတ် access ကိုရှေးခယျြမှုပါရာဒိုင်းခုနှစ်, Lesscher et al ။ (2010) ကြွက်အီသနောအတှေ့အကွုံသာ2ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်ကွီနိုင်မသမာမှအာရုံမခံစားနိုင်သောဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကွီနိုင်ထို့အပြင်သော်လည်းအီသနောရန်ဆန္ဒရှိကွီနိုင်အာရုံစူးစိုက်မှုကဒီအီသနောဟာသူတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောအရင်းအမြစ်စဉ်အခါ, အီသနောအတှေ့အကွုံ2wk နှင့်အတူကြွက်တွေမှာအရက်သောက်လျှော့ချရန်ပျက်ကွက်ဖြည့်စွက်, အီသနောအရက်သောက်၏ဖိနှိပ်ဝယ်ယူပြုလေ၏။ ထူးခြား, ကွီနိုင်မှအာရုံမခံစားနိုင်သောတစ်ဦးထပ်မံနိမိတ်လက္ခဏာကို6ပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာသူတို့အနေနဲ့ဆန္ဒရှိမှာကွီနိုင်နှင့်မပါဘဲအီသနော၏ပုလင်းထဲကနေတန်းတူပမာဏသောက်အဖြစ် 8 ပတ်တစ်ခုအီသနောအရက်သောက်သမိုင်းနှင့်အတူကြောင့်ကြွက်တွေမှာအီသနောအတွေ့အကြုံကိုပိုမိုရက်သတ္တပတ်, ကွီနိုင်မှလစျြလြူရှုဖြစ်လာခဲ့သည် အာရုံစူးစိုက်မှု။
မူးယစ်ဆေးရှာ၏လေ့ရှုထောင့်အကဲဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းလေ့လာမှုများ, Dickinson နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် (တစ်စီးရီးအတွက်Dickinson et al ။ 2002; မိုင် et al ။ 2003) နှုတ်မျိုချမိပါအီသနောသို့မဟုတ်ကင်း၏တန်ဖိုး, lithium chloride တို့-သွေးဆောင်ဖျားနာခြင်းနှင့်အတူ၎င်း၏စားသုံးမှုချိတ်တွဲခြင်းဖြင့်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်တုံ့ပြန်လျှော့ချခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ စားစရာဘို့တုံ့ပြန်အော်ပရေတာတန်ဖိုးမှအထိခိုက်မခံသည်ထင်ရှားသော်လည်း, အီသနောသို့မဟုတ်ကင်းဘို့သုဉ်းအတွက်တုံ့ပြန်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ထူးခြား, လီသီယမ်နှင့်အတူအရသာခြင်းကိုမနှစ်သက်အေးစက်နေစဉ်အတွင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးများအတွက်တုံ့ပြန်၏ reacquisition စဉ်အတွင်းများအတွက်တုံ့ပြန်နှင့် lithium-သွေးဆောင်အကျပ်အတည်းများကြောင့်သာဖြစ်လေသည်နဲ့ဆက်စပ်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြေရှင်းချက်၏စားသုံးမှုနှစ်ဦးစလုံးသိသိသာသာလျော့နည်းသွားခဲ့သည် (Dickinson et al ။ 2002; မိုင် et al ။ 2003) ။ ဤသည်မျိုးသုဉ်းအတွက်မူးယစ်ဆေးများအတွက်တုံ့ပြန်မဟုတ်ပါဘူးသော်လည်းမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုတန်ဖိုးမှအထိခိုက်မခံဖြစ်နိုင်သည်ကိုပြသသည်။ အထက်အကျဉ်းချုပ်အခြားလေ့လာမှုများ, (ပေးထားWolffgramm 1991; Wolffgramm နှင့် Heyn 1991, 1995; Heyn 1996, 1998; Galli နှင့် Wolffgramm 2004, 2011; Hopf et al ။ 2010; Lesscher et al ။ 2010), ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမူးယစ်ဆေးအလိုလိုစားသုံးမှုကြောင့်တရားရှိဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတစ်ဦးဆန္ဒပြထုံးစံ၌ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်စေခြင်းငှါ, အချိန်ကြာမြင့်စွာမူးယစ်အတွေ့အကြုံကိုပြီးနောက်ပြစ်ဒဏ်ဖို့အာရုံမခံစားနိုင်သောဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုပြသပါ။ Distal မူးယစ်ဆေးတွေကိုသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး-related လုပ်ရပ်များဖြစ်ကောင်းတိုးပွားလာမူးယစ်ဆေးအတွေ့အကြုံကိုနှင့်အတူစွဲရောဂါ၏ဆိုးရွားလာနေသောတစ်တဖြည်းဖြည်းကိုယ်စားပြုမူးယစ်ဆေးအလိုလိုစားသုံးမှုမတိုင်မီပြစ်ဒဏ်ဖို့အာရုံမခံစားနိုင်သောဖြစ်လာလုပ်ပါ။
ဒီအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီပါက (မူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်တုံ့ပြန်အော်ပရေတာပြစ်ဒဏ်ဖို့အစပိုင်းတွင်အထိခိုက်မခံကြောင်း, သို့သော်ဤအမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တဖြည်းဖြည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာမူးယစ်အတွေ့အကြုံကိုပြီးနောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်Deroche-Gamonet et al ။ 2004; Vanderschuren နှင့် Everitt 2004; Pelloux et al ။ 2007; ဘီးလင်း et al ။ 2009) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေမှာတော့ကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်း footshock နှင့်အတူအပြစ်ပေးခံခဲ့ရသည်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး footshock-ဆက်စပ်အေးစက်လှုံ့ဆော်မှု (CS) ၏ရှေ့တော်၌အကဲဖြတ်။ ကန့်သတ်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များမှာဆန္ဒရှိ CS သိသိသာသာရှာကြံကင်းနှိမ်နင်း။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, footshock-ဆက်စပ် CS (ကအချိန်ကြာမြင့်စွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသမိုင်းနှင့်အတူကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်းမသက်ရောက်ခဲ့Vanderschuren နှင့် Everitt 2004) ။ footshock (ထက်တစ် footshock-ဆက်စပ် CS) ကပြစ်ဒဏ်အပြီးတွင်ကင်းထပ်တိုးခွင့်နှင့်အတူကြွက် (ကန့်သတ်ကင်း access ကိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာတိရိစ္ဆာန်များထက်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြန်လည်စတင်Ahmed က 2012) ။ (ထိုနည်းတူစွာ footshock နှင့်အတူရှာကြံကင်း၏ပြစ်ဒဏ်လည်းသိသိသာသာန့်အသတ်မူးယစ်ဆေးအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကင်းများအတွက်တုံ့ပြန်နှိမ်နင်းပေမယ့်တိရစ္ဆာန်များ၏တစ်ဦးအဖွဲ့ခွဲနောက်ပိုင်းတွင်ပြစ်ဒဏ်မှမှအာရုံမခံစားနိုင်သောပြသPelloux et al ။ 2007) ။ ဤအရလဒ်များကိုနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း၌, Deroche-Gamonet နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (Deroche-Gamonet et al ။ 2004; ဘီးလင်း et al ။ 2009) footshock နှင့်အတူကင်း၏သွေးကြောသွင်းပေးပို့ချိတ်တွဲသိသိသာသာန့်အသတ်မူးယစ်ဆေးအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကင်းနှိမ်နင်းပေမယ့်ပြစ်ဒဏ်ဤ sensitivity ကိုရှည်ရှည်ကိုကင်းအတွေ့အကြုံကိုပြီးနောက်ကြွက်တစ်အဖွဲ့ခွဲများတွင်ပျောက်ကြောင်းကိုကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်။
နောက်ဆုံးတစ်ခု setup ကိုအတွက်ကြွက်အကျိုးကိုရောက်ရှိဖို့တခုဓာတ်အားဇယားကွက်ကိုကူးဖို့ရှိသည်ထားတဲ့အတွက်ဂန္ထဝင် "အဆီးအတား Box ကို," (အပေါ်အခြေခံပြီးJenkins et al ။ 1926), Cooper က et al ။ (2007) လျှပ်စစ်လိုင်းများ၏စျေးမှာပြင်းထန်မှုတိုးပွားလာပြင်းထန်မှုတိရိစ္ဆာန်များအကြားကဒီမတူညီအောင်မြင်ရန်လိုအပ်ပေမယ့်, မူးယစ်ဆေးဝါးမှရှောင်ကြဉ်ဖို့ကန့်သတ်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသမိုင်းနှင့်အတူကြွက်ဦးဆောင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကင်း-ဆက်စပ်တွေကိုတင်ဆက်ထိုတွေကိုများအတွက်တုံ့ပြန်၏ reinstatement evoked ရှိသောကြွက်များတစ်အဖွဲ့ခွဲ၌တည်၏။ အတူတူအဲဒီဒေတာလုံလောက်သောမူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေအတွေ့အကြုံ, မူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့်ဆည်းပူးနေနှင့်အတူပြစ်ဒဏ်ဖို့အာရုံမခံစားနိုင်သောဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုပြသပါ။ သို့သော်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များဤခုခံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်မူးယစ်ဆေး-အတွေ့အကြုံရှိတစ်ဦးချင်းစီအကြားမှတ်သားကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။
ဤတွင်ကျနော်တို့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်မူးယစ်ဆေးစွဲလက္ခဏာတွေ၏ဖြစ်ပျက်မှုများအတွက်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားအကျဉ်းချုပ်ပါပြီ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက် DSM-IV စံအပေါ် အခြေခံ. (စားပွဲတင် 1()အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး 2000), စွဲလမ်းအပြုအမူအတော်ကြာရောဂါလက္ခဏာတွေ, ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ဆိုလိုသည်မှာတင်းမာမှုဖြစ်ပေါ်ပြန့်ပြီ, neurocognitive လိုငွေပြမှု, မျိုးသုဉ်းရန်ခုခံ, မူးယစ်ဆေးဝါး, nondrug ဆုလာဘ်ကျော်မူးယစ်ဆေးများအတွက်ဦးစားပေးများနှင့်ပြစ်ဒဏ်ခုခံဘို့လှုံ့ဆျောမှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုစွဲလမ်းအပြုအမူပေါ်ပေါက်နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြနှင့်တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်လေ့လာ, မူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့်ဆည်းပူးနေအခြေခံသောအာရုံကြောစက်ယန္တရားပစ္စုပ္ပန်နှင့်လူသားတွေအတွက်မအဖြစ် nonhuman တိရိစ္ဆာန်များအတွက် dysregulated ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုဖေါ်ပြခြင်း။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအတွက်မူးယစ်ဆေးစွဲများ၏အာရုံကြောများနှင့်မျိုးရိုးဗီဇနောက်ခံကိုလေ့လာဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ ကိုကင်းစားသုံးမှုတင်းမာမှု၏အမှု၌, ဒီသုတေသနပြီးသားဆဲဖြစ်ပြီးအရေးကြီးသော neurobiological ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထုတ်ဖေါ်ဖို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, ကမကြာသေးမီကကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (၏တင်းမာမှုကိုထိန်းချုပ်ထားသော dorsal striatum အတွက်လုံးဝအသစ်သောမော်လီကျူးလမ်းကြောင်း၏အောင်မြင်မှုများရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်Holland et al ။ 2010; im et al ။ 2010; မကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ Ahmed ကနှင့် Kenny 2011) ။ ငါတို့သည်ဤသုတေသန, အဆုံး၌, ဒီကြီးကျယ်သောရောဂါပိုမိုထိရောက်သောကုသမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်သွားစေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဤနေရာတွင်တင်ပြအဆိုပါအကျဉ်းချုပ်ကိုလည်းအနာဂတ်တွင်သုတေသနပြုအတွက်ဖြေရှင်းခံရဖို့လိုအပျကွောငျးအများအပြားထူးချွန်မေးခွန်းများကိုသတ်မှတ်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက်စွဲလမ်းများထဲမှလက္ခဏာများ၏ဖြစ်ပျက်မှုမူးယစ်ဆေးစွဲနေတဲ့မော်ဒယ်မှတူညီခြင်းမရှိပါကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခံရသင့်ပါတယ်။ ရှင်းနေသည်မှာ DSM-IV စံ (ခုနစ်ခုစံသတ်မှတ်ချက်သုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးခံရဖို့လိုအပျကွောငျးဖော်ပြအမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး 2000) ။ ထိုကွောငျ့, တဦးတည်းအရေးကြီးသောပြဿနာကဒီမှာဆွေးနွေးတင်ပြစွဲလမ်းအပြုအမူများ၏သီးခြားအသုံးအနှုန်းတွေအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သို့မဟုတ်အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်အတူတကွဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူအမျိုးမျိုးရှုထောင့်အမှန်ပင် Co-ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအကြံပြုတချို့ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများ (ဥပမာရှိပါတယ် Wolffgramm 1991; Deroche-Gamonet et al ။ 2004) ။ ဥပမာ, ကိုကင်းသုံးစွဲမှုတင်းမာမှု (ကမကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့တိုးချဲ့လှုံ့ဆျောမှု, neurocognitive လိုငွေပြမှု, မူးယစ်ဆေး preference ကို, သို့မဟုတ်ပြစ်ဒဏ်ခုခံနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏တူညီသောအုပ်စုတွင်ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်ပြထားပြီး Ahmed က 2012) ။ လယ်ပြင်တစ်ခုမှာနောက်ဆက်တွဲအဓိကစိန်ခေါ်မှုစွဲလမ်းအပြုအမူအမျိုးမျိုးရှုထောင့်များ၏ Co-ဖြစ်ပျက်မှုဆုံးဖြတ်ရန်သောအခွအေနနှင့်သက်ဆိုင်ရာနောက်ခံအာရုံကြောအပြောင်းအလဲများကို elucidate ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အနာဂတ်သုတေသနအတွက်နောက်ထပ်ဆက်စပ်စိန်ခေါ်မှုစွဲအပေါငျးတို့သလက္ခဏာတွေတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဒါမှမဟုတ်တချို့လက္ခဏာတွေလူသားတိကျတဲ့ရှိမရှိဖြစ်ပွားနိုင်သည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ရလိမ့်မည်။ အဆုံးစွန်သောဖြစ်နိုင်ခြေစိတ်ဝင်စားဖို့ဦးနှောက်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးစွဲကိုသတိထားပါဆက်လက်တည်ရှိရန်လိုအပ်သည်ပင်အချိန်ကြာမြင့်စွာမူးယစ်ထိတွေ့ပြီးနောက်, သာတစ်ဦးချင်းစီ၏အဖွဲ့ခွဲကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်စွဲလမ်းအပြုအမူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအားနည်းချက်တစ်ဦးချင်းဆပ်သောမျိုးဗီဇ, အာရုံကြောနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အချက်များဆုံးဖြတ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤရွေ့ကား (ပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်ဆက်ဆက်ကန့်သတ်မထားပါ, ထိုကဲ့သို့သော Impulse အဖြစ်ကဒေါသ features တွေ preexistingDalley et al ။ 2007b; ဘီးလင်း et al ။ 2008), လိင် (Anker နှင့်ကာရိုး 2011), နှင့်လူမှုရေးအဆင့်အတန်း (ဥပမာ, Wolffgramm 1991; မော်ဂန် et al ။ 2002) ။ ဥပမာ, ကြွက်များတွင်နှစ်ခုမကြာသေးခင်ကလွတ်လပ်သောရွေးချယ်မှုလေ့လာမှုများအရေးပါတယ်လို့အစားအစာကျော်ကင်း preference ကိုအမျိုးသမီးကိုကင်းစွဲ (Kertstetter et al ဖို့ပိုအားနည်းချက်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုခြင်း, 2-3 ကြိမ်အကြောင်းကိုယောက်ျားထက်အမျိုးသမီးအတွက်ပိုပြီးမကြာခဏခဲ့ကွောငျးဖျောပွခဲ့ 2009 ။ ပယ်ရီ et al ။ 2011) ။ နောက်ဆုံး, စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများထိုကဲ့သို့သော psychostimulants (ကိုကင်း, စိတ်ကြွဆေး, စိတ်ကြွဆေး), opiates (ဘိန်းဖြူ), အီသနောနှင့်နီကိုတင်းအဖြစ်ကျယ်ပြန့်မူကွဲ pharmacological အတန်းမှလာကြ၏။ ဒီဆေးတွေသီးအသီးအမြင့်မားစွဲလမ်းဖြစ်လူသိများသည်သော်လည်းမိမိတို့၏ဆွေမျိုးစွဲလမ်းအလားအလာကွဲပြားခြားနားသည်, မိမိတို့အားဖြည့်အစွမ်းသတ္တိကိုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များ (ဥပမာပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်, Caprioli et al ။ 2009; Solinas et al ။ 2011) ။ ထို့ကြောင့်, (ကျွန်တော်မျိုးဗီဇသည်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ၏ဖြစ်ပျက်မှုနှင့်၎င်း၏နောက်ခံအာရုံကြောသောအတိုင်းအတာကိုသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်, နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အချက်များယေဘုယျအားဖြင့်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်စစ်မှန်သောကိုင်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့မူးယစ်ဆေးတိကျတဲ့ရှိမရှိBadiani et al ။ 2011) ။ ဥပမာ, ကမကြာသေးမီကမူးယစ်ဆေးဝါးကွဲပြားခြားနားမှုကိစ္စ (အမှန်ပင်ပြုအကြံပြုခြင်း, ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏တင်းမာမှုဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အပြန်အလှန်ယဘေုယမပြုခဲ့ရှာတွေ့ခဲ့သည်Lenoir et al ။ 2011).
ပင်ဤမဖြေရှင်းနိုင်ကိစ္စရပ်များနှင့်စိတ်တွင်ထူးချွန်မေးခွန်းများကိုအတူကျနော်တို့ preclinical စွဲသုတေသန၏နောက်ဆုံးငါးဆယ်စုနှစ်အချက်အလက်များ၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြကြောင်း, နှင့်တိရစ္ဆာန်စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်စစ်မှန်သောစွဲတူသောအပြုအမူလေ့လာနေအတွက်မကြာသေးမီအကျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရလဒ်မူကြောင်းကိုစဉ်းစား ကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းစွဲရောဂါ၏သဘောသဘာဝကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုစိတ်လှုပ်ရှားစရာနောက်ထပ်သုတေသနတစ်ခုစတင် pad ပါ၏။
LJMJV NIDA (မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ် ZonMw (ကျန်းမာရေးသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးများအတွက်နယ်သာလန်အဖွဲ့အစည်း) Grant က 91207006 (LJMJV, P. Voorn နှင့် AB Smit မှချီးမြှင့်), ZonMw (ကျန်းမာရေးသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးများအတွက်နယ်သာလန်အဖွဲ့အစည်း) / အမျိုးသားအင်စတီကျုကထောက်ခံနေသည် LJMJV နှင့် RC ပီယပ်မှချီးမြှင့်) ပူးပေါင်း Grant က 60-60600-97-211 () ။ SHA ပြင်သစ်သုတေသနကောင်စီ (CNRS), အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သုတေသနအေဂျင်စီ (ANR), ဘော်ဒိုး-Segalen တက္ကသိုလ်, နှင့် Conseil ဒေသဆိုင်ရာ d'Aquitaine (CRA) ကထောက်ခံသည်။
အယ်ဒီတာများ: R. ခရစ္စတိုဖာပီယပ်နှင့်ပေါလုဂျေ Kenny
မှာရရှိနိုင်ပါစွဲလမ်းပေါ်အပိုဆောင်းပတ်သ က်. www.perspectivesinmedicine.org
Ahmed က SH ။ 2005 ။ စွဲလမ်းများအတွက်အဓိကအန္တရာယ်အချက်: မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ရရှိနိုင်မှုအကြားချိန်ခွင်လျှာဘက်မညီ။ EUR J ကို Pharmacol 526: 9-20 ။
Ahmed က SH ။ 2010 ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက် validation အကျပ်အတည်း: မူးယစ်ဆေးစွဲဆီသို့ Non-disorders မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပြင်။ neuroscience Biobehav ဗြာ 35: 172-184 ။
Ahmed က SH ။ 2011 ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏စက်လှေကား။ မူးယစ်ဆေးစွဲ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ။ Neuromethods 53: 267-292 ။
Ahmed က SH ။ 2012 ။ မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲတိရိစ္ဆာန်များအောင်၏သိပ္ပံ။ neuroscience 211: 107-125 ။
Ahmed က SH, Cador အမ် 2006 ။ compulsive ကိုကင်းသုံးစွဲမှုကနေ psychomotor အကဲဆတ်ခြင်း Dissociation ။ Neuropsychopharmacology 31: 563-571 ။
Ahmed က SH, Kenny PJ ။ 2011 ။ ကိုကင်းစွဲ၏မော်လီကျူးကုဒ်ကွဲအက်။ ILAR ဂျာနယ် 52: 309-320 ။
Ahmed က SH, Koob gf ။ 1998 ။ အလယ်အလတ်ကနေအလွန်အကျွံမူးယစ်စားသုံးမှုမှအကူးအပြောင်း: hedonic set ကိုအမှတ်အတွက်ပြောင်းလဲခြင်း။ သိပ္ပံ 282: 298-300 ။
Ahmed က SH, Koob gf ။ 1999 ။ ကြွက်များတွင်တင်းမာမှုလျှော့ချပြီးနောက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုများအတွက် set ကိုအမှတ်အတွက်ကြာရှည်တိုး။ Psychopharmacology 146: 303-312 ။
Ahmed က SH, Walker က JR, Koob gf ။ 2000 ။ မူးယစ်ဆေးတင်းမာမှုများ၏သမိုင်းနှင့်အတူကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူယူဖို့လှုံ့ဆျောမှုအတွက် persistent တိုး။ Neuropsychopharmacology 22: 413-421 ။
Aigner TG, Balster RL ။ 1978 ။ အစားအစာကိုနှိုင်းယှဉ်ကင်း: မျောက်တွေကိုအတွက်ရွေးချယ်မှုကိုအပြုအမူ။ သိပ္ပံ 201: 534-535 ။
Allen က RM, Dykstra LA က, Carelli RM ။ 2007 ။ အဆိုပါအပြိုင်အဆိုင် N-methyl-D-aspartate အဲဒီ receptor ရန်, LY235959 ဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့မှု, Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်ကင်းစားသုံးမှုတင်းမာမှုလျှော့ချနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ Psychopharmacology 191: 341-351 ။
American Psychiatric Association ။ 2000 ။ စိတ်ရောဂါ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလက်စွဲ, IV-TR ed ။ American Psychiatric Association, ဝါရှင်တန်ဒီစီ။
Anker JJ, ကာရိုး ME ။ 2011 ။ မိန်းမတွေကယောက်ျားထက်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဖို့ပိုအားနည်းချက်နေသောခေါင်းစဉ်: preclinical လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထားများနှင့်သားအိမ်ဟော်မုန်း၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Curr ထိပ်တန်းပြုမူနေ neuroscience 8: 73-96 ။
Anker JJ, ပယ်ရီ JL, Gliddon LA က, ကာရိုး ME ။ 2009 ။ Impulse ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏တင်းမာမှုလျှော့ချခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 93: 343-348 ။
Audrain-McGovern J ကို, Rodriguez: D, Epstein LH, Cuevas J ကို, ရော့ဂျာ K ကို Wileyto EP ။ 2009 ။ နှောင့်နှေးလျှော့ဆေးလိပ်သောက်တစ်ခု etiological အခန်းကဏ္ဍသို့မဟုတ်ပါကဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်ပါသလား? 103-99: မူးယစ်ဆေးအရက် 106 မူတည်တယ်။
Augier အီး, Vouillac ကို C, Ahmed က SH ။ 2011 ။ Diazepam ကိုကင်း Self-စီမံခန့်ခွဲကြွက်များတွင် abstinence ၏ရှေးခယျြမှုအားပေးအားမြှောက်။ စှဲလမျးသူ Bioldoi: 10.1111 / j.1369-1600.2011.00368.x ။
Badiani တစ်ဦးက, ဘီးလင်း: D, Epstein: D, Calu: D, Shaham Y. 2011 ။ psychostimulant စွဲနှိုင်းယှဉ် Opiate: အဆိုပါကွဲပြားခြားနားမှုအရေးပါဘူး။ နတ်ဗြာ neuroscience 12: 685-700 ။
Bechara အေ 2005 ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတှနျးလှနျ willpower ဆုံးရှုံးမှုမြား: A neurocognitive ရှုထောင့်။ နတ် neuroscience 8: 1458-1463 ။
ဘီးလင်း: D, Apr AC အ, Dalley JW, Robbins TW, Everitt BJ ။ 2008 ။ အမြင့် Impulse compulsive ကင်း-ဆည်းပူးနေမှ switch သည်ခန့်မှန်းထားသည်။ သိပ္ပံ 320: 1352-1355 ။
ဘီးလင်း: D, Balado အီး, Piazza PV, Deroche-Gamonet V. 2009 ။ စားသုံးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတဏှာ၏ပုံစံကိုကြွက်များတွင်ကင်းစွဲတူသောအပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 65: 863-868 ။
ဗင်္ရက်ရှာဟာအို Posthumus EJ, Waldroup လုပ် SA, Ettenberg အေ 2008 ။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းမှတိုးချဲ့နေ့စဉ် access ကိုအောက်ပါမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံလှုံ့ဆျောမှုကြီးထွား။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 32: 863-869 ။
Bergman J ကို, Johanson အီး။ 1981 ။ မျောက်တွေကိုအတွက်ကိုကင်းများကထိန်းသိမ်းထားတုံ့ပြန်အပေါ်လျှပ်စစ်ရှော့ခ်၏ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 14: 423-426 ။
Bowden-ဂျုံးစ် H ကို, McPhillips M က, ရော်ဂျာ R ကို, Hutton က S, Joyce EM ။ 2005 ။ တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူးလေ့လာမှု: အရက်မှီခိုအတွက် ventromedial prefrontal cortex ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှအထိခိုက်မခံစမ်းသပ်မှုအပေါ်အန္တရာယ်-တာ။ J ကို Neuropsychiatry Clin neuroscience 17: 417-420 ။
Briand LA က, Flagel SB, Garcia က-Fuster MJ, Watson ဟာ SJ, Akil H ကို, Sarter M က, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ 2008 ။ သိမြင်မှု function ကိုနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းရန်, တိုးချဲ့, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မရ access ကိုအောက်ပါ prefrontal dopamine D2 receptors အတွက် persistent ပွောငျးလဲ။ Neuropsychopharmacology 33: 2969-2980 ။
Calu DJ သမား, Stalnaker က TA, ဖရန့် TM, Singh က T က, Shaham Y ကို, Schoenbaum G. အ 2007 ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာကြွက်များတွင်လေ့လာသင်ယူ orbitofrontal-မှီခိုပယ်ဖျက်ခံရထဲမှာကြာရှည်လိုငွေပြမှုထုတ်လုပ်သည်။ 14-325: Mem ကို 328 လေ့လာပါ။
Cantin L ကို, Lenoir M က, Augier အီး, Vanhille N ကို, Dubreucq S က, Serre က F, Vouillac ကို C, Ahmed က SH ။ 2010 ။ ကိုကင်းကြွက်၏တန်ဖိုးလှေကားအပေါ်အနိမ့်သည်: စွဲဖို့ခံနိုင်ရည်အဘို့အဖြစ်နိုင်ပါ့မလားသက်သေအထောက်အထား။ PLoS ONE 5: e11592 ။
Caprioli: D, Celentano M က, Dubla တစ်ဦးက, Lucantonio က F, Nencini P ကို, Badiani အေ 2009 ။ ဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရွေးချယ်မှု: လူသားများနှင့်ကြွက်များတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွင်တစ် function ကိုအဖြစ် Cocaine- နှင့်ဘိန်းဖြူ-ဆည်းပူးနေ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 65: 893-899 ။
ME Carroll, လက်ခ် ST ။ 1993 ။ ကြွက်များတွင်ဃကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး Autoshaping: ဝယ်ယူအပေါ် nondrug အခြားရွေးချယ်စရာစစ်ကူသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology 110: 5-12 ။
ME Carroll, လက်ခ် ST, Nygaard SL ။ 1989 ။ တစ်ဦးကတစ်ပြိုင်နက်တည်းရရှိနိုင် nondrug စစ်ကူဝယ်ယူကာကွယ်ပေးသည်သို့မဟုတ်ကင်း-အားဖြည့်အပြုအမူများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလျော့နည်းစေပါသည်။ Psychopharmacology 97: 23-29 ။
ကုန်သည်များ CD ကို, Garavan H ကို, Bellgrove MA ။ 2009 ။ သိမြင်မှုနှင့်လက်တွေ့မှ neuroscience ထံမှတုံ့ပြန်မှုတားစီး၏အာရုံကြောအခြေခံသို့ Insights ။ neuroscience Biobehav ဗြာ 33: 631-646 ။
Charney DA, Zikos အီး, Gill KJ ။ 2010 ။ အရက်မှီခိုထံမှအစောပိုင်းပြန်လည်နာလန်ထူ: abstinence မြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်တားဆီးကြောင်းအချက်များ။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှုရယူထားသော 38: 42-50 ။
Christensen CJ, Silberberg တစ်ဦးက, Hursh SR, Huntsberry ME, Riley AL ။ 2008 ။ ကြွက်များတွင်ကင်းနှင့်အစားအစာ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတန်ဖိုးကို: ဝယ်လိုအား၏အဆမော်ဒယ်၏စမ်းသပ်မှု။ Psychopharmacology 198: 221-229 ။
Cooper ကတစ်ဦး, ဗာနာ-Ygael N ကို, Levy: D, Shaham Y ကို, Zangen အေ 2007 ။ ကိုကင်းရှာဖို့ cue-သွေးဆောင် relapse ၏ပဋိပက္ခကြွက်မော်ဒယ်။ Psychopharmacology 194: 117-125 ။
Dalley JW, Lääne K ကို Pena Y ကို, Theobald DE, Everitt BJ, Robbins TW ။ 2005 ။ ကိုကင်းသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူ၏သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာကြွက်များတွင်အာရုံစိုက်မှုနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးလိုငွေပြမှု။ Psychopharmacology 182: 579-587 ။
Dalley JW, Fryer TD, Brichard L ကို, et al ရော်ဘင်ဆင် ESJ, Theobald DEH, Lääne K ကို Pena Y ကို, Murphy က ER, Shah က Y ကို, Probst K သည်။ 2007a ။ နျူကလိယ D2 /3receptors ရို Impulse နှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်း accumbens ။ သိပ္ပံ 315: 1267-1270 ။
Dalley JW, Lääne K ကို Theobald DE, Pena Y ကို, ဘရုစ် CC ကို, Huszar AC အ, Wojcieszek M က, Everitt BJ, Robbins TW ။ 2007b ။ ကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်း methylenedioxymethamphetamine Self-အုပ်ချုပ်ရေးရုပ်သိမ်းစဉ်အတွင်းစဉ်ဆက်မပြတ်အမြင်အာရုံအာရုံစိုက်မှုအတွက်ခံနိုင်ရည်လိုငွေပြမှု: D-စိတ်ကြွဆေးနှင့်စိတ်ကြွဆေးနဲ့နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုကနေရလာဒ်။ Neuropsychopharmacology 32: 1195-1206 ။
del Olmo N ကို, Higuera-မာတာတစ်ဦးက, Miguéns M က, Garcia-Lecumberri ကို C, Ambrosio အီး 2007 ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအလွန်တောင်းဆိုနေတာရေဝင်္ task ထဲမှာ performace ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ Psychopharmacology 195: 19-25 ။
Deroche V ကို, Le Moal က M, Piazza PV ။ 1999 ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကြွက်များအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါး၏မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများတိုးပွားစေပါသည်။ EUR J ကို neuroscience 11: 2731-2736 ။
Deroche-Gamonet V ကို, ဘီးလင်း: D, Piazza PV ။ 2004 ။ ကြွက်များတွင်စွဲတူသောအပြုအမူများအတွက်အထောက်အထား။ သိပ္ပံ 305: 1014-1017 ။
Dickinson အေ 1985 ။ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အလေ့အထများ: အပြုအမူကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို။ ဖီးလ်ဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို 308: 67-78 ။
Dickinson တစ်ဦးက, Wood က N ကို, Smith က JW ။ 2002 ။ ကြွက်များကရှာကြံအရက်သေစာ: အရေးယူမှုသို့မဟုတ်အလေ့အထ? QJ Exp Psychol 55B: 331-348 ။
Diergaarde L ကို, Pattij T က, Poortvliet ငါ Hogenboom က F, De Vries W က, Schoffelmeer ANM, De Vries တီဂျေ။ 2008 ။ Impulse ရွေးချယ်မှုနှင့်ထကြွလွယ်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကြွက်များတွင်ရှာကြံနီကိုတင်း၏ကွဲပြားအဆင့်ဆင့်မှအားနည်းချက်ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 63: 301-308 ။
ဒိုဟာဆီဂျေ, Ogbomnwan Y ကို, Williams က B, Frantz K. 2009 ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များအားဖြင့်အသက်အရွယ်-မှီခိုမော်ဖင်းအကိုက်စားသုံးမှုနှင့် cue-သွေးဆောင် reinstatement, ဒါပေမယ့်စားသုံးမှုထဲမှာမတင်းမာမှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 92: 164-172 ။
ဒိုမင်ဂို AI အ, Vaynshteyn J ကို, Voss Hu, Ren က X, Gradinaru V ကို, Zang က F, Deisseroth K ကိုက de Araujo IE ကို, Friedman ဂျေ 2011 ။ Leptin အာဟာရ၏အကျိုးကိုတန်ဖိုးကိုထိန်းညှိ။ နတ် neuroscience 14: 1562-1568 ။
Ferrario CR, Gorny, G, Crombag HS လီ Y ကို, Kolb B, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ 2005 ။ အာရုံကြောနှင့်ထိန်းချုပ်ကနေဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုအကူးအပြောင်းနဲ့ဆက်စပ်အပြုအမူ plasticity ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 58: 751-759 ။
Galli, G, Wolffgramm ဂျေ 2004 ။ ရေရှည်မိမိဆန္ဒအလျောက် D-စိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲမှုများနှင့်ကြွက်များအတွက်နောက်ဆက်တွဲ D-စိတ်ကြွဆေးစွဲအဘို့အမူအကျင့်ခန့်မှန်း။ 73-51: မူးယစ်ဆေးအရက် 60 မူတည်တယ်။
Galli, G, Wolffgramm ဂျေ 2011 ။ ကြွက်တစ်ဝတ္ထုကုသမှုချဉ်းကပ်၏သက်ရောက်မှုများကအလွန်အကျွံနှင့်တရားရှိဖို့နီကိုတင်းဆည်းပူးနေ၏ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 217: 261-270 ။
Garavan H ကို, ရဲရငျ့စှာပွော JC ။ 2005 ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုသို့ Neurocognitive ထိုးထွင်းသိမြင်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ 9: 195-201 ။
ဂျော့ခ်ျအို Mandyam CD ကို, Wee က S, Koob gf ။ 2008 ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှတိုးချဲ့ access ကိုကြာရှည် prefrontal Cortex-မှီခိုအလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းထုတ်လုပ်သည်။ Neuropsychopharmacology 33: 2474-2482 ။
Gipson CD ကို, Bardo MT ။ 2009 ။ စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှတိုးချဲ့ access ကိုကြွက်များတွင်တာဝန်ဝတဲ့နှောင့်နှေးအတွက်ထကြွလွယ်သောရှေးခယျြမှုတိုးပွားစေပါသည်။ Psychopharmacology 207: 391-400 ။
စတိန်း RZ, Craig အေဒီ, Bechara တစ်ဦးက, Garavan H ကို, Childress AR, Paulus အမတ်, Volkow ND ။ 2009 ။ မူးယစ်ဆေးစွဲထဲမှာချို့ယွင်းထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း၏ neurocircuitry ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ 13: 372-380 ။
Grimm JW, မျှော်လင့်ခြင်း BT, ပညာရှိ RA, Shaham Y. 2001 ။ ဆုတ်ခွာပြီးနောက်ကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွား။ သဘာဝတရား 412: 141-142 ။
အာရှရပင် RN, Schuster CR ။ 1974 ။ မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်ပြစ်ဒဏ်အားဖြင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှိမ်နင်းရေး။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 2: 199-208 ။
Hao က Y ကိုမာတင်-Fardon R ကို, Weiss အက်ဖ် 2010 ။ အမူအကျင့်များနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ metabotropic အချိုမှု receptor2/3၏သက်သေအထောက်အထားများနှင့်ကိုကင်း-ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကြွက်များတွင် metabotropic အချိုမှု receptor5dysregulation: မှီခိုဖို့အကူးအပြောင်းအတွက် Factor ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 68: 240-248 ။
Heyn အေ 1996 ။ ကြွက်များတွင် opiate စွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 53: 11-25 ။
Heyn တစ်ဦးက, Wolffgramm ဂျေ 1998 ။ တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက် D-စိတ်ကြွဆေးမှစွဲလမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု: အရက်နှင့် opiate များအတွက်အဖြစ်တူအခြေခံမူ။ Psychopharmacology 140: 510-518 ။
Hodos ဒဗလျူ 1961 ။ ဆုလာဘ်အစွမ်းသတ္တိ၏တစ်ဦးအတိုင်းအတာအဖြစ်တိုးတက်ရေးပါတီအချိုးအစား။ သိပ္ပံ 134: 943-944 ။
Holland ဂျာ Im HI, Amelio AL, Kocerha J ကိုဘာလီကျွန်း P ကို, Lu ကမေး, Willoughby: D, Wahlestedt ကို C, Conkright MD, Kenny PJ ။ 2010 ။ Striatal microRNA CREB အချက်ပြမှတဆင့်ကင်းစားသုံးမှုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝတရား 466: 197-202 ။
Hölterသည် SM, Engelmann M က, Kirschke ကို C, Liebsch, G, Landgraf R ကို, Spanagel R. 1998 ။ ထပ်ခါတလဲလဲအီသနောဟာဆင်းရဲချို့တဲ့ဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူရေရှည်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအီသနောအရက်သောက်ပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင်အီသနောဟာဆင်းရဲချို့တဲ့နေစဉ်အတွင်းစိုးရိမ်စိတ်-related အပြုအမူတိုးပွားစေပါသည်။ ပြုမူနေ Pharmacol 9: 41-48 ။
Hopf အက်ဖ်ဒဗလျူ, Chang SJ, Sparta DR, Bower က MS, Bonci အေ 2010 ။ အရက်များအတွက်လှုံ့ဆျောမှုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးလအတွင်း3မှ4ပြီးနောက်ကွီနိုင်မသမာသောခံနိုင်ရည်ဖြစ်လာသည်။ အရက် Clin Exp Res 34: 1565-1573 ။
im HI, Holland ဂျာဘာလီ P ကို, Kenny PJ ။ 2010 ။ MeCP2 microRNA-212 နှင့်အတူ homeostatic interaction ကမှတဆင့် BDNF စကားရပ်များနှင့်ကင်းစားသုံးမှုထိန်းချုပ်သည်။ နတ် neuroscience 13: 1120-1127 ။
Jenkins TN, Warner LH, မှူး CJ ။ 1926 ။ တိရိစ္ဆာန်လှုံ့ဆျောမှု၏လေ့လာမှုများအတွက်စံယန္တရား။ J ကို comp Psychol 6: 361-382 ။
Kalivas PW, O 'Brien C. 2008 ။ ဆန္ဒပြ neuroplasticity တစ်ဦးရောဂါဗေဒအဖြစ်မူးယစ်ဆေးစွဲ။ Neuropsychopharmacology 33: 166-180 ။
Kasanetz က F, Deroche-Gamonet V ကို, Berson N ကို, Balado အီး, Lafourcade M က, Manzoni အို Piazza PV ။ 2010 ။ စွဲဖို့အကူးအပြောင်း Synaptic plasticity အတွက်မြဲချို့ယွင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သိပ္ပံ 328: 1709-1712 ။
Kearns DN, Weiss SJ, Panlilio LV ။ 2002 ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားအပြုအမူများ၏ဖိနှိပ်မှုအေးစက်။ 65-253: မူးယစ်ဆေးအရက် 261 မူတည်တယ်။
Kearns DN, ဂိုမက်ဇ-Serrano MA, Tunstall BJ ။ 2011 ။ preclinical သုတေသနတစ်ဦးကသုံးသပ်မှုမူးယစ်ဆေးနှင့် Non-မူးယစ်ဆေးစစ်ကူ differential အပြုအမူကိုထိခိုက်ကြောင်းဆန္ဒပြ။ 4-261: Curr မူးယစ်ဆေးဗြာ 269 အလွဲသုံးစားပြုမှု။
Kenny PJ ။ 2007 ။ ဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်များနှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ 28: 135-141 ။
Kenny PJ, Markou အေ 2005 ။ နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး acute ဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်များကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုတစ်ကြာရှည်တိုးဖြစ်ပေါ်သည်။ Neuropsychopharmacology 31: 1203-1211 ။
Kerstetter Ka, Ballis M က, Duffin-Lutgen သည် SM, Tran J ကို, ဘီရန်းလေး, Kippin TE ။ 2010 ။ အစားအစာနှင့်ကိုကင်းများအကြားရွေးချယ်ခြင်းအတွက်လိင်နှင့်ထိုး, အစီအစဉ်အမှတ် 266.6 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံအစည်းအဝေးအစီအစဉျ၌တည်၏။ အာရုံကြောသိပ္ပံ, San Diego မှ, CA. များအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း
Kippin TE, Fuchs RA, ကြည့်ရှု RE ။ 2006 ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာကဆက်ပြောပါတယ်နှင့်ကြွက်များအတွက်ရှာကြံကိုကင်းများတိုးမြှင့် reinstatement မှ noncontingent ကင်းထိတွေ့ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ။ Psychopharmacology 187: 60-67 ။
Kitamura အို Wee က S, Specio SE, Koob gf, Pulvirenti အယ်လ် 2006 ။ ကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးစက်လှေကား: တစ်ဦးကထိုး-အကျိုးသက်ရောက်မှု function ကို။ Psychopharmacology 186: 48-53 ။
Knackstedt LA က, Kalivas PW ။ 2007 ။ တိုးချဲ့ access ကို TOT ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမူးယစ်ဆေး-ရစေတယ် reinstatement သော်လည်းမအပြုအမူာင်းပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို Pharmacol Exp Ther 322: 1103-1109 ။
Koffarnus MN, ဝုဒ် JH ။ 2011 ။ လျှော့စျေးနှုန်းသည်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းဝယ်လိုအားနဲ့ဆက်စပ်ပေမယ့်မပေး sucrose နေကြသည်။ စှဲလမျးသူ Bioldoi: 10.1111 / j.1369-1600.2011.00361.x ။
Koob gf, လွိုက် GK, Mason ဆို BJ ။ 2009 ။ စွဲလမ်းများအတွက် pharmacotherapies ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး: တစ်ဦးက Rosetta Stone ချဉ်းကပ်။ နတ်ဗြာမူးယစ်ဆေး Disc 8: 500-515 ။
Larson eb, Anker JJ, Gliddon LA က, Fons KS, ကာရိုး ME ။ 2007 ။ တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်စဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏တင်းမာမှုအပေါ်အီစရိုဂျင်နှင့်အဓိကချို့ယွင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ Exp Clin Psychopharmacol 15: 461-471 ။
Lesage MG ။ 2009 ။ တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာ nondrug စစ်ကူတွေနဲ့ကြွက်များတွင်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေအားဖြည့် abstinence ၏ဆိုးကျိုးများ: အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏တစ်ဦး nonhuman မော်ဒယ်ဆီသို့။ Psychopharmacology 203: 13-22 ။
Lenoir M က, Ahmed က SH ။ 2007 ။ ဘိန်းဖြူ-သွေးဆောင် reinstatement compulsive ဘိန်းဖြူသုံးစွဲခြင်းမှတိကျတဲ့နှင့်ဘိန်းဖြူဆုလာဘ်အရေးကြီးတဲ့ထံမှ dissociable ဖြစ်ပါတယ်။ Neuropsychopharmacology 32: 616-624 ။
Lenoir M က, Ahmed က SH ။ 2008 ။ တစ်ဦး nondrug အစားထိုး၏ထောက်ပံ့ရေးဆိုးရွားလာခဲ့သည်ဘိန်းဖြူသုံးစွဲမှုလျော့ကျစေပါတယ်။ Neuropsychopharmacology 33: 2272-2282 ။
Lenoir M က, Serre က F, Cantin L ကို, Ahmed က SH ။ 2007 ။ ပြင်းထန်သောချိုကိုကင်းဆုလာဘ်ထက်မလွန်။ PLoS ONE 2: e698 ။
Lenoir M က, Guillem K ကို Koob gf, Ahmed က SH ။ 2011 ။ တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်မူးယစ်ဆေးသတ်မှတ်ချက်။ စှဲလမျးသူ Bioldoi: 10.1111 / j.1369-1600.2011.00385.x ။
HMB Lesscher, Wallace MJ, Zeng L ကို, ဝမ် V ကို, Deitchman JK, McMahon T က, ရှုပ်ထွေး ro, နယူတန် pm တွင်။ 2009 ။ Amygdala ပရိုတိန်း kinase ကို C Epsilon အရက်သောက်ထိန်းချုပ်သည်။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ 8: 493-499 ။
Lesscher HMB, ဗန် Kerkhof LWM, Vanderschuren LJMJ ။ 2010 ။ ကြွက်များတွင်တရားရှိဖို့နဲ့လစျြလြူရှုအီသနောအရက်သောက်။ အရက် Clin Exp Res 34: 1219-1225 ။
လျူ Y ကို, Roberts သည် DCS, မော်ဂန်ဃ 2005a ။ ကြွက်များတွင်ကင်းသဖြင့်ထိန်းသိမ်းထား breakpoints အားအပေါ်တိုးချဲ့-access ကို Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology 179: 644-651 ။
လျူ Y ကို, Roberts သည် DCS, မော်ဂန်ဃ 2005b ။ ဆေးထိုးခြင်းနှင့်သွေးကြောသွင်းဆေးထိုးမြန်နှုန်းသက်ရောက်မှု: ကြွက်များတွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုများအသိ။ EUR J ကို neuroscience 22: 195-200 ။
လျူ Y ကို, မော်ဂန်: D, Roberts သည် DCS ။ 2007 ။ ကြွက်များတွင်ကင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေးများအားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ။ Psychopharmacology 195: 369-375 ။
lu, L, Grimm JW, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Shaham Y. 2004 ။ ဆုတ်ခွာပြီးနောက်ကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွား: preclinical အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ Neuropharmacology 47 (ပျော့ပျောင်း 1): 214-226 ။
Mantsch JR, Yuferov V ကို, Mathieu-Kia လေး, ဟိုတစ်ဦးက, Kreek MJ ။ 2004 ။ ကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင် reinstatement နှင့်ဦးနှောက် mRNA အဆင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်အနိမ့်ကိုကင်းဆေးများနှိုင်းယှဉ်မြင့်မားဖို့တိုးချဲ့သုံးစွဲနိုင်၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology 175: 26-36 ။
Mantsch JR, Baker DA, Francis က DM, Katz ES, Hoks MA, Serge JP ။ 2008 ။ Stressor- နှင့် corticotropin အချက်-သွေးဆောင် reinstatement နှင့်တက်ကြွသောစိတ်ဖိစီးမှု-related အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုလွှတ်ကြွက်များအားဖြင့်ရှည်လျား-access ကိုကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါလုပ်ခဲ့ပြီးနေကြသည်။ Psychopharmacology 195: 591-603 ။
Marusich ဂျာ Beckmann JS, Gipson CD ကို, Bardo MT ။ 2010 ။ ကြွက်များတွင်စစ်ကူအဖြစ် Methylphenidate: ဆက်ပြောပါတယ်ပေးပို့နှင့်စားသုံးမှုတင်းမာမှု။ Exp Clin Psychopharmacol 18: 257-266 ။
McNamara R ကို, Dalley JW, Robbins TW, Everitt BJ, ဘီးလင်းဃ 2010 ။ ရိုကဲ့သို့သော Impulse ကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးတင်းမာမှုလျှော့ချခန့်မှန်းမထားဘူး။ Psychopharmacology 212: 453-464 ။
Mendez အိုဝါရှိမုနျကဘ, ဟတ် N ကို, Mitchell ကနေ MA, Nation JR, Wellman PJ, Setlow ခ 2010 ။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းတာဝန်ဝတဲ့နှောင့်နှေးအတွက်ထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှုအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်မြဲတိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပြုမူနေ neuroscience 124: 470-477 ။
မိုင် FJ, Everitt BJ, Dickinson အေ 2003 ။ ကြွက်များကရှာကြံခံတွင်းကိုကင်း: action သို့မဟုတ်အလေ့အထ? ပြုမူနေ neuroscience 117: 927-938 ။
Moeller အပြည်ပြည်သွား, Dougherty DM, Barratt ES, Schmitz JM, Swann AC အ, Grabowski ဂျေ 2001 ။ ကုသမှုကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းအပေါ် Impulse ၏သက်ရောက်မှု။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှုရယူထားသော 21: 193-198 ။
မော်ဂန်: D, Grant က ka, Gage, HD, Mach RH အ, Kaplan JR, Prioleau အို Nader SH, Buchheimer N ကို, Ehrenkaufer RL, Nader, MA ။ 2002 ။ မျောက်များအတွက်လူမှုကြီးစိုး: Dopamine D2 receptors နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှု။ နတ် neuroscience 5: 169-174 ။
မော်ဂန်: D, Smith ကနေ MA, Roberts သည် DCS ။ 2005 ။ Bing Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆင်းရဲချို့တဲ့ကြွက်များတွင်ကင်း၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများထိခိုက်မခံတဲ့ထုတ်လုပ်သည်။ Psychopharmacology 178: 309-316 ။
မော်ဂန်: D, လျူ Y ကို, Roberts သည် DCS ။ 2006 ။ ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုမှလျင်မြန်စွာနှင့်ဇွဲာင်း။ Neuropsychopharmacology 31: 121-128 ။
Nader, MA, Woolverton WL ။ 1991 ။ တစ်ဦး discrete-စမ်းသပ်မှုတွေရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းထဲမှာမူးယစ်ဆေးရွေးချယ်မှုတခုတခုအပေါ်မှာအခြားရွေးချယ်စရာစစ်ကူ၏ပြင်းအားတိုးပွားလာ၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology 105: 169-174 ။
Negus အက်စ်အက်စ်။ 2003 ။ မျောက်တွေကိုအတွက်ကိုကင်းနှင့်အစားအစာအကြားရွေးချယ်မှုလျင်မြန်စွာအကဲဖြတ်: D-စိတ်ကြွဆေးနှင့် flupenthixol နှင့်အတူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Neuropsychopharmacology 28: 919-931 ။
Negus အက်စ်အက်စ်။ 2006 ။ naloxone, buprenorphine နှင့် methadone သက်ရောက်မှု: Non-မှီခိုနှင့်ဘိန်းဖြူ-မှီခိုမျောက်တွေကိုဘိန်းဖြူနှင့်အစားအစာအကြားရှေးခယျြမှု။ J ကို Pharmacol Exp Ther 317: 711-723 ။
Nigg JT, Wong MM, Martel MM, Jester JM, Puttler LI, Glass ကို JM, အဒမ် KM, Fitzgerald သူ, Zucker RA ။ 2006 ။ ပြဿနာအရက်သောက်ခြင်းနှင့်အရက်နှင့်အခြားပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက်အန္တရာယ်မှာမြီးကောင်ပေါက်များတွင်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တစ်ဦးခန့်မှန်းအဖြစ်ညံ့ဖျင်းသောတုံ့ပြန်မှုတားစီး။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု 45: 468-475 ။
-Norman N ကို, Hogarth L ကို, Panlilio L ကို, Shoaib အမ် 2011 ။ ကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းနီကိုတင်းနှင့် sucrose နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုတည်ထောင်။ 14th EBPS နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်အစည်းအဝေး၌တည်၏။ အမ်စတာဒမ်, အဆိုပါနယ်သာလန်။
O 'Brien က CP ။ 2008 ။ စွဲလမ်းများအတွက်အထောက်အထား-based ကုသမှု။ ဖီးလ်ဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို 363: 3277-3286 ။
O'Connor EC, ချပ်မန်း K သည်, ဘတ္ P ကို, Mead AN ။ 2011 ။ အလွဲသုံးစားမှုတာဝန်ယူမှုများအတွက်ကြွက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမော်ဒယ်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တရားဝင်မှု။ neuroscience Biobehav ဗြာ 35: 912-938 ။
Oleson eb, Roberts သည် DCS ။ 2009 ။ နောက်ဆုံးအချိုးသို့မဟုတ်စားသုံးမှုဖြစ်စေ၏တင်းမာမှုလျှော့ချထုတ်လုပ်ရန်ကြောင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသမိုင်းကိုအောက်ပါစျေးနှုန်းနှင့်ကိုကင်းသုံးစွဲမှု၏အမူအကျင့်, စီးပွားရေးအကဲဖြတ်။ Neuropsychopharmacology 34: 796-804 ။
Olmstead MC, Lafond သင်္ဘော MV, Everitt BJ, Dickinson အေ 2001 ။ ကြွက်များကရှာကြံကင်းတဲ့ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအရေးယူမှုဖြစ်ပါတယ်။ ပြုမူနေ neuroscience 115: 394-402 ။
Orio L ကို, Edwards က S နဲ့, ဂျော့ခ်ျအို Parsons LH, Koob gf ။ 2009 ။ တိုးချဲ့-access ကိုအခြေအနေများအတွက်ကိုကင်းများအတွက်တိုးမြှင့လှုံ့ဆျောမှုအတွက် endocannabinoid စနစ်တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို neuroscience 29: 4846-4857 ။
Pacchioni လေး, ဂါဘရီအဲတစ်ဦး, ကြည့်ရှု RE ။ 2011 ။ ကြွက်များတွင်တိုတောင်းသောသို့မဟုတ်ရှည်လျားနေ့စဉ်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာပြီးနောက်ကင်း-ရှာ၏ striatum ဖျန်ဖြေ Dorsal ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 218: 396-400 ။
Paronis, CA, Gasior M က, Bergman ဂျေ 2002 ။ မျောက်များအတွက်တစ်ဦးကဝတ္ထုရှေးခယျြမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း: အစားအသောက်နှင့် IV မူးယစ်ဆေးရရှိနိုင်မှု၏တစ်ပြိုင်တည်းပါ fixed အချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင်ကင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology 163: 283-291 ။
Parsegian တစ်ဦးက, Glen သည့် WB ဂျူနီယာ Lavin တစ်ဦး, ကြည့်ရှု RE ။ 2011 ။ စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအာရုံကို Set-ပြောင်းလဲလိုငွေပြမှုကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင် prefrontal cortical neurophysiology ပွောငျးလဲ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 69: 253-259 ။
Paterson NE, Markou အေ 2003 ။ ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်းစားသုံးမှုပြီးနောက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ NeuroReport 14: 2229-2232 ။
Paterson NE, Markou အေ 2004 ။ ကြွက်များတွင်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးထပ်တိုးခွင့်နှင့်ဆက်နွယ်ကြာရှည်နီကိုတင်းမှီခို။ Psychopharmacology 173: 64-72 ။
Paulus အမတ်။ 2007 ။ Psychiatry-ပြောင်းလဲ homeostatic အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအလုပ်မဖြစ်? သိပ္ပံ 318: 602-606 ။
Pelloux Y ကို, Everitt BJ, Dickinson အေ 2007 ။ ပြစ်ဒဏ်အောက်မှာကြွက်များကရှာကြံ compulsive မူးယစ်ဆေး: သမိုင်းယူပြီးမူးယစ်ဆေးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology 194: 127-137 ။
ပယ်ရီ JL, Larson eb, ဂျာမန် JP, က Madden GJ, ကာရိုး ME ။ 2005 ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် IV ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူတစ်ဦးခန့်မှန်းအဖြစ် Impulse (အထူးလျှော့စျေးနှောင့်နှေး) ။ Psychopharmacology 178: 193-201 ။
ပယ်ရီ AN, Westenbroek ကို C, Becker က JB ။ 2011 ။ ကိုကင်းဦးစားပေးများနှင့်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာဆုလာဘ်, အစီအစဉ်အမှတ် 688.06 အတွက်အကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးမှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံအစည်းအဝေးအစီအစဉျ၌တည်၏။ အာရုံကြောသိပ္ပံ, San Diego မှ, CA. များအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း
Pickens CL, Airavaara M က, Thébergeက F, Fanous S ကိုမျှော်လင့် BT, Shaham Y. 2011 ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏ပေါက်ဖွား၏ Neurobiology ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience 34: 411-420 ။
ပီယပ် RC, O 'Brien က CP, Kenny PJ, Vanderschuren LJMJ ။ 2012 ။ အောင်မြင်မှုများ, ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အလားအလာ: စွဲ pharmacotherapies ၏ဆင်ခြင်တုံတရားဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ အေးနွေ Harb ရှုထောင့် Meddoi: 10.1101 / cshperspect.a012880 ။
အထမ်းသမားဖြစ်မှု, Olsen AS, Gurnsey K ကို Dugan ကို BP, Jedema HP က, Bradberry CW ။ 2011 ။ မျောက်တွေကိုအတွက်နာတာရှည်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး: ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှု, သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို neuroscience 31: 4926-4934 ။
Poulos CX, Le အေဒီ, က Parker JL ။ 1995 ။ Impulse အရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမြင့်မားဖို့တစ်ဦးချင်းလွယ်ကူစွာထိခိုက်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ပြုမူနေ Pharmacol 6: 810-814 ။
Quadro IMH, Miczek Ka ။ 2009 ။ ပြင်းထန်သောကင်း Bing နှစျယောကျသည် Modes: လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ကြောင့်ကြွက်များတွင်တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်အခြေအနေများစားသုံးမှု၏တိုးပွားလာမှုနှုန်းအပြီးတိုးမြှင့်ဇွဲ။ Psychopharmacology 206: 109-120 ။
ရစ်ချတ်ဆန်ရော်ဘာ, Roberts သည် DCS ။ 1996 ။ ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးလေ့လာမှုများအတွက်တိုးတက်ရေးပါတီအချိုးအချိန်ဇယား: ထိရောက်မှုအားဖြည့်အကဲဖြတ်ဖို့နည်းလမ်း။ J ကို neuroscience နည်းလမ်းများ 66: 1-11 ။
Robbins TW, Ersche KD, Everitt BJ ။ 2008 ။ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ဦးနှောက်၏မှတ်ဉာဏ်စနစ်များကို။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 1141: 1-21 ။
Rodd ZA, ဘဲလ် RL, Kuc Ka, မာဖီ JM, Lumeng L ကိုလီ TK, McBride WJ ။ 2003 ။ အရက်- သာ. နှစ်သက် (P), ကြွက်နေဖြင့်အော်ပရေတာအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲအရက်ခြို့ငဲ့၏ဆိုးကျိုးများ။ Neuropsychopharmacology 28: 1614-1621 ။
ရော်ဂျာ JL, De Santi က S, ကြည့်ရှု RE ။ 2008 ။ တိုးချဲ့စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမူးယစ်ဆေးရှာ၏ reinstatement ပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်ကြွက်များတွင်ဝတ္ထုအရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုမှုချို့ယွင်း။ Psychopharmacology 199: 615-624 ။
Schenk S က, Harper ကို DN, Do ဂျေ 2011 ။ novel အရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်: တိုင်းတာခြင်းကိစ္စများနှင့်အတိုအကြားရုံးတင်စစ်ဆေးကြားကာလအောက်ပါ MDMA Self-အုပ်ချုပ်ရေးသက်ရောက်မှု။ J ကို Psychopharmacol 25: 1043-1052 ။
Schippers MC, Binnekade R ကို, Schoffelmeer ANM, Pattij T က, De Vries တီဂျေ။ 2012 ။ ကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ထကြွလွယ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအကြား Unidirectional ကြားဆက်ဆံရေး။ Psychopharmacology 219: 443-452 ။
Solinas M က, Thiriet N ကို, Chauvet ကို C, Jaber အမ် 2011 ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ခြင်းဖြင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ဆက်ဆံမှု။ prog Neurobiol 92: 572-592 ။
Sorge RE, Stewart ကဂျေ 2005 ။ ကြွက်များတွင်ရှာကြံစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ကင်း footshock မှတာမူးယစ်ဆေးများရပ်စဲစဉ်ကတည်းကမူးယစ်ဆေးသမိုင်းနှင့်အချိန်များ၏အလှူငွေ။ Psychopharmacology 183: 210-217 ။
Spanagel R ကို, Hölterသည် SM ။ 1999 ။ ထပ်ခါတလဲလဲအရက်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အဆင့်တွေနဲ့ရေရှည်အရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေး: အရက်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်? အရက်အရက် 34: 231-243 ။
Spragg SDS ။ 1940 ။ ချင်ပန်ဇီမျောက်အတွက်မော်ဖင်းအကိုက်စွဲ။ comp Psychol Monogr 15: 1-132 ။
Tzschentke TM အလိုအလျောက်။ 2007 ။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များ Update ကို: အခွအေနမြေားရာအရပျ preference ကို (CPP က) ပါရာဒိုင်းနှင့်အတူဆုလာဘ်တိုင်းတာခြင်း။ စှဲလမျးသူ Biol 12: 227-462 ။
Uhl ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, RW တိုးတက်ကြီးပွားခြင်း။ 2004 ။ ဦးနှောက်မမှန်မှုအရရှုပ်ထွေးတဲ့မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်တော်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 61: 223-229 ။
ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါးဒဗလျူ 2011 ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်ခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအထောက်အထား-based pharmacological ကုသမှု။ 5-3: Curr မူးယစ်ဆေးဗြာ 31 အလွဲသုံးစားပြုမှု။
Vanderschuren LJMJ, Everitt BJ ။ 2004 ။ မူးယစ်ဆေးရှာအချိန်ကြာမြင့်စွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဖြစ်လာသည်။ သိပ္ပံ 305: 1017-1019 ။
Vanderschuren LJMJ, Everitt BJ ။ 2005 ။ compulsive မူးယစ်ဆေးရှာ၏အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောယန္တရားများ။ EUR J ကို Pharmacol 526: 77-88 ။
ရပ်ကွက် SJ, မရှိခြင်းကို C, မော်ဂန်: D, Roberts သည် DCS ။ 2006 ။ discrete-စမ်းသပ်မှုတွေဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးကြွက်များတွင်ကင်း၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများထိခိုက်မခံတဲ့ထုတ်လုပ်သည်။ Psychopharmacology 185: 150-159 ။
Wee က S, ဝမ် Z ကို, Woolverton WL, Pulvirenti L ကို, Koob gf ။ 2007 ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ session တစ်ခုကြာချိန်နှင့်အတူကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင့်မှုနှုန်းအပေါ် aripiprazole တစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း dopamine D2 အဲဒီ receptor agonist ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuropsychopharmacology 32: 2238-2247 ။
Wee က S, Mandyam CD ကို, Lekic DM, Koob gf ။ 2008 ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးစွဲနိုင်နှင့်အတူကြွက်များတွင်ကင်းစားသုံးမှုများအတွက်တိုးမြှင့လှုံ့ဆျောမှုအတွက်α1-Noradrenergic system ကိုအခန်းကဏ္ဍကို။ EUR Neuropsychopharmacol 18: 303-311 ။
Wee က S, Orio L ကို, Ghirmai S က, Cashman JR, Koob gf ။ 2009 ။ Kappa opioid receptors ၏တားစီးကိုကင်းထပ်တိုးခွင့်နှင့်အတူကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်ကင်းစားသုံးမှု attenuated ။ Psychopharmacology 205: 565-575 ။
Winstanley, CA, Bachtell RK, Theobald DEH, Laali S က, အစိမ်းရောင်က TA, Kumar ကတစ်ဦး, Chakravarty S က, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ ။ 2009 ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းတိုးလာ Impulse: အ orbitofrontal cortex အတွက် DFosB များအတွက်အခန်းက္ပ။ Cereb Cortex 19: 435-444 ။
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ 1973 ။ အမျိုးမျိုးသောအချိန်ဇယားအပေါ်အီသနောထိတွေ့အောက်ပါကြွက်များတွင်မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှု။ Psychopharmacologia 29: 203-210 ။
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ 1996 ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်။ Annu ဗြာ neuroscience 19: 319-340 ။
Wolffgramm ဂျေ 1991 ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခု ethopharmacological ချဉ်းကပ်။ neuroscience Biobehav ဗြာ 15: 515-519 ။
Wolffgramm J ကို, Heyn အေ 1991 ။ လူမှုအပြုအမူ, ကြီးစိုးနှင့်ကြွက်များ၏လူမှုရေးဆင်းရဲချို့တဲ့မူးယစ်ဆေးရွေးချယ်မှုဆုံးဖြတ်ရန်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 38: 389-399 ။
Wolffgramm J ကို, Heyn အေ 1995 ။ ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၏နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ဖှံ့ဖွိုးတိုး: ထိန်းချုပ်ထားမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုကနေထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးရန်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 70: 77-94 ။
Zapata တစ်ဦးက, Minney VL, Shippenberg TS ။ 2010 ။ ကြွက်များတွင်ကြာရှည်အတွေ့အကြုံကိုရှာလေ့ကိုကင်းဖို့ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထားရာမှ Shift ။ J ကို neuroscience 30: 15457-15463 ။
zhou W က, Zhang က F ကို, လျူ H ကို, တန်က S, လိုင် M က, Zhu H ကို, Kalivas PW ။ 2009 ။ relapse ၏မော်ဒယ်တစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်အခြေအနေများ cue အားဖြင့်သွေးဆောင်ရှာကြံဘိန်းဖြူအပေါ်သင်တန်းနှင့်ဆုတ်ခွာကာလဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 203: 677-684 ။